Skinfood Myanmar Official
Show All Up to 40%OFF Assesories Cleansing Sun Cover Mask Wash Off Men Series Skincare Skincare (Aqua Series) Skincare (Black Pomegranate Series) Skincare (Gold Caviar Series) Skin Care (Propolis Series) Skincare (Black Sugar Series) Skincare (Avocado Series) Skincare (Lettuce & Cucumber Series) Skincare (Peach Series) Skincare (Peach Sake) Skincare (Pantothenic Water Series) Skincare (Tomato Series) Skincare (Royal Honey Essential Series) Skincare (Yuja Spot Care) Color Cosmetic (Foundation & Pact) Makeup Base Cushion Concealer Eye Care Lip & Cheek Lip Care Hair Care Hand Cream Face & Body Body Care
Mask Wash Off
Skincare (Aqua Series)
Skincare (Black Pomegranate Series)
Skincare (Gold Caviar Series)
Skin Care (Propolis Series)
Skincare (Black Sugar Series)
Skincare (Avocado Series)
Skincare (Lettuce & Cucumber Series)
Skincare (Peach Series)
Skincare (Peach Sake)
Skincare (Pantothenic Water Series)
Skincare (Tomato Series)
Skincare (Royal Honey Essential Series)
Skincare (Yuja Spot Care)
Color Cosmetic (Foundation & Pact)
No.6B, Kyaw Kwat Thit Street, Near Ma Hlwa Kone Street, Yangon, MM Tamwe
#Up to 40%OFF - Buy selected items, Up to 40%OFF
Sunday10 AM - 18:30
Tuesday10 AM - 18:30
Wednesday10 AM - 18:30
Thursday10 AM - 18:30
Friday10 AM - 18:30
Saturday10 AM - 18:30
2731 Buckwheat Loose Powder #40 23g (Original Price - 17500)
"Buck Wheat မှ ရရှိသော အဆီအနှစ် များ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားပြီး ပိုးသားလေးလို နူးညံ့သော အမှုန့်လေးများကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့ကြည်လင်စေကာ အဆီပြန်ခြင်းကို အချိန်အကြာကြီးထိန်းပေးနိုင်ပြီး Skin Tone ကို တောက်ပချောမွေ့စေပါသည်။ မိတ်ကပ်သား ကွက်ခြင်း၊ ပြာခြင်း မဖြစ်ပဲ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ကာ မျက်နှာပေါ်ရှိ အပြစ်အနာဆာ နှင့် အရေးကြောင်းများ၊ ချွေးပေါက်များကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ မိတ်ကပ်သားရောင်နှင့် တစ်သားတည်းကျနေခြင်း တို့ကြောင့် သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေပါသည်။ #40 (Lavender) - ခရမ်းအနည်
1903 Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X 210g (Original Price - 35500)
"Organic Black Sugar ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး မျက်နှာပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေခြင်း၊ ဆဲလ်သေများကို ကွာကျစေပြီး နူးညံ့သော အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ခြင်း၊ Scrub Type ဖြစ်သော်လည်း အသုံးပြုသည့်အခါ သကြားမှုန်လေးများကြောင့် ယောင်ရမ်းခြင်း၊ ကြမ်းရှခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေပဲ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာစေပါသည်။ အရေပြားကြမ်းတမ်းမှုများကို လျော့ပါးစေပြီး အသားအရေကို သန့်စင်စေကာ နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သောပမာဏကိုယူကာ စိုစွတ်သောနေရာများသို့ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍန်ဖြင့်ပွတ်ပေးရပါမည်
3361 Royal Honey Propolis Enrich Toner 160ml (Original Price - 46500)
"Black Bee Extract , Propolis Extract 5% , Royal Jelly Extract 5% နှင့် Royal Honey Extract 5% တို့ပါဝင်ပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သော Black Bee Propolis Extract ၏ အာနိသင်ကြောင့် အသားအရေကို နုပျို ကျန်းမာစေကာ ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့စိုပြေတင်းရင်းစေသည့် Toner ဖြစ်ပါသည်။ အနိမ့်ဆုံး Temperature နှင့် Container ထဲတွင် ၇ရက်ခန့်ထားပြီး ၃ရက်ခန့် အချဉ်ဖောက်ထားသည့် Black Bee Propolis အစွမ်းကြောင့် အရေပြားပြသနာများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး ကျန်းမာလှပသော အသားအရေကို ရရှိစေ နိ
3363 Royal Honey Propolis Enrich Essence 50ml (Original Price - 60500)
"အရေပြားကို အာဟာရဓါတ် အပြည့်အဝရရှိစေသည့် Black Bee Propolis Extract 63% , Royal Jelly Extract 10% , Black Honey Extract 10% ပါဝင်သောကြောင့် ကျန်းမာပြီး စိုပြေလှပသော အသားအရေကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အနိမ့်ဆုံး Temperature နှင့် Container ထဲတွင် ၇ရက်ခန့်ထားပြီး ၃ရက်ခန့် အချဉ်ဖောက်ထားသည့် Black Bee Propolis အစွမ်းကြောင့် အရေပြားပြသနာများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး ကျန်းမာလှပသော အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ကို အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ ဖြည့်ပေးပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းစေခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို
3364 Royal Honey Propolis Enrich Cream 63ml (Original Price - 66500)
"Propolis Extract 40% , Royal Jelly Extract 10% , Royal Honey Extract 10% တို့ပါဝင်ပြီး အစိုဓါတ်အမြင့်မားဆုံး ရရှိစေကာ အရေပြားကို အာဟာရဓါတ်များဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည့် Cream ဖြစ်ပါသည်။ အနိမ့်ဆုံး Temperature နှင့် Container ထဲတွင် ၇ရက်ခန့်ထားပြီး ၃ရက်ခန့် အချဉ်ဖောက်ထားသည့် Black Bee Propolis အစွမ်းကြောင့် အရေပြားပြသနာများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး ကျန်းမာလှပသော အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ Non- Sticky Texture နှင့် အစိုဓါတ် အပြည့်အဝဖြည့်ပေးသော ကြောင့် အသုံးပြု သည့်အခါတွင် စေးကပ်ကပ်မဖြစ်ပဲ အရေပြား
3411 Sugar Color Tint In Balm #1 3.2g (Original Price - 18500)
" အစိုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သော ပျားဖယောင်း နှင့် Mango Butter တို့ကြောင့် ခြောက်သွေ့သော နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓာတ် ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မိမိနှုတ်ခမ်းသားများပေါ်တွင် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ဆိုးနိုင်ပါသည်။ "
3413 Sugar Color Tint In Balm #3 3.2g (Original Price - 18500)
အစိုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သော ပျားဖယောင်း နှင့် Mango Butter တို့ကြောင့် ခြောက်သွေ့သော နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓာတ် ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မိမိနှုတ်ခမ်းသားများပေါ်တွင် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ဆိုးနိုင်ပါသည်။ "
3414 Sugar Color Tint In Balm #4 3.2g (Original Price - 18500)
3592 Black Sugar Satin Powder Pact Spf25 Pa++ N21 91g (Original Price - 38000)
ခရစ်စတယ်မှုန်လေးများကဲ့သို့သော အမဲရောင်သကြားမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် Powder Pact ဖြစ်ပြီး အရောင်အားဖြင့် #N21 နှင့် #N23 နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ #N21သည် အသားဖြူသူများနှင့်သင့်တော်ပြီး #N23သည် အရောင်ကာလာ ပိုရင့်သည့်အတွက် အသားညိုသူများနှင့် သင့်တော်ပါသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ပြီးနောက် အပေါ်မှ အသုံးပြုသည့်အခါတွင် နူးညံ့သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူ တောက်ပသော အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ပြီး အပေါ်မှ ထပ်မံပုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။"
3593 Black Sugar Satin Powder Pact Spf25 Pa++ N23 91g (Original Price - 38000)
ခရစ်စတယ်မှုန်လေးများကဲ့သို့သော အမဲရောင်သကြားမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် Powder Pact ဖြစ်ပြီး အရောင်အားဖြင့် #N21 နှင့် #N23 နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ #N21သည် အသားဖြူသူများနှင့်သင့်တော်ပြီး #N23သည် အရောင်ကာလာ ပိုရင့်သည့်အတွက် အသားညိုသူများနှင့် သင့်တော်ပါသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ပြီးနောက် အပေါ်မှ အသုံးပြုသည့်အခါတွင် နူးညံ့သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူ တောက်ပသော အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ပြီး အပေါ်မှ ထပ်မံပုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
381-2 Milk Shake Point Make-up Remover ( Nutrition, Without Irritation ) 160ml (Original Price - 21500)
"နို့ဖြင့်အဓိကပြုလုပ်ထားပြီး နို့မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များစွာ ပါဝင်သည့်အတွက် မျက်လုံးတဝိုက်ရှိ Eye Shadow နှင့် နှုတ်ခမ်းနီများကို အလွယ်တကူသန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိမိလိုအပ်သောပမာဏကိုယူကာ Cotton pad ဖြင့် မျက်နှာအနှံ့သို့ သုတ်လိမ်းကာ မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ရေ နှင့် သစ်ပေးပြီးနောက် မျက်နှာသစ်ဆေးအသုံးပြုကာ ပြန်သစ်ပေးရပါမည်။"
"ႏုိ႔ျဖင့္အဓိကျပဳလုပ္ထားျပီး ႏို႔မွရရွိေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည့္အတြက္ မ်က္လံုးတ၀ိုက္ရွိ Eye Shadow နွင့္ နႈတ္ခမ္းနီမ်ာ
62-13 Black Sugar Strawberry Mask Wash Off 100g (Exfoliating And Moisturizing) (Original Price - 21500)
"Organic Brazilian Black Sugar နှင့် Strawberry သီး၏အဆီအနှစ်များပေါင်းစပ် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေပြီး အသားအရေကိုချောမွေ့စိုပြေဝင်းပစေပါသည်။ Organic Brazilian Black Sugar နှင့် Strawberry သီး၏ အဆီအနှစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး - အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေခြင်း - အသားအရေကိုကြည်လင်စေခြင်း - ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းသောအသားအရေနှင့် ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အာနိသင်များသောကြောင့် နူးညံ့စိုဝင်းသော အသားအရေကို ရရှိစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာကိုသန့်စင်ပြီးနောက် စိုစွတ်နေ
1906 Black Sugar Perfect Scrub Foam 150ml (Original Price - 24500)
"Black Sugar ၊ Rice Wine နှင့် ဆေးဘက်ဝင်Botanical Oils တို့ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားသည့် အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေသောScrub Foam ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေ ကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့မှုများ၊ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အရေပြားအစိုဓါတ်ကို ရရှိစေကာ Flawless Skin ကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေနီရဲခြင်းများကို လျော့ပါးသက်သာစေကာ အမဲစက်များနှင့်အသားအရေ အဖတ်လန်ခြင်းများကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိမိအသုံးပြုလိုသော ပမာဏကို လက်အတွင်းသို့ ယူကာ မျက်နှာအနှံ့ပွတ်လိမ်းပေးပြီး အနည်းငယ်နွ
72501 Lavender Food Mask 120g (Original Price - 28500)
အသားအရေကို အစိုဓာတ်ပြည့်ဝလိုပြီး နူးညံ့ချောမွေ့လို သူများအတွက်သင့်တော်သည်။
( Moisture Soothing Mask) 10% Lavender Flower Water ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို အစိုဓာတ်ပြည့်ဝစေပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။ Gel type ဖြစ်သောကြောင့် လိမ်းချယ်ရပေါ့ပါးသည်။ Lavender ရနံ့ ကြောင့် အသားအရေကိုသာမက စိတ်ကိုပါ ကြည်လင်စေနိုင်ပါသည်။ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်းမှာပါ လွယ်ကူစွာ သုံးနိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ ရေဆေးချနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သောပမာဏကိုယူကာ မျက်လုံး နှင့် နှုတ်ခမ်း တဝိုက်ကို မထိခိုက်စေပဲ အသ
1055-23 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #3 (Original Price 18500)
မည်သည့်အသားအရေမျိုးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ပြီး ရေဓါတ်ပါဝင်ခြင်း ၊တာရှည်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပစေခြင်း ၊ နူးညံ့သော ထိတွေ့မှုရှိခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်ရှိသောပါးနီတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ #03 (Raspberry) Raspberry ရနံ႔ အသုံးပြုပုံ - ပါးပြင်ပေါ်တွင် အစက်နှစ်စက်သုံးစက်ခန့်တို့ပေးပြီး ပါးရိုးတလျောက် Blush (သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ညှိပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ #Water Type Blusher , #03 Mellow Raspberry
1055-21 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #1 (Original Price 18500)
မည်သည့်အသားအရေမျိုးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ပြီး ရေဓါတ်ပါဝင်ခြင်း ၊တာရှည်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပစေခြင်း ၊ နူးညံ့သော ထိတွေ့မှုရှိခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်ရှိသောပါးနီတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ #01 (သဖန္းသီး) Fig ရနံ အသုံးပြုပုံ - ပါးပြင်ပေါ်တွင် အစက်နှစ်စက်သုံးစက်ခန့်တို့ပေးပြီး ပါးရိုးတလျောက် Blush (သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ညှိပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ #Water Type Blusher , #6 Fig & Plum
1055-26 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #6 (Original Price 18500
မည်သည့်အသားအရေမျိုးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ပြီး ရေဓါတ်ပါဝင်ခြင်း ၊တာရှည်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပစေခြင်း ၊ နူးညံ့သော ထိတွေ့မှုရှိခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်ရှိသောပါးနီတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ #6 (မက်မွန်သီး) PEACH ရနံ အသုံးပြုပုံ - ပါးပြင်ပေါ်တွင် အစက်နှစ်စက်သုံးစက်ခန့်တို့ပေးပြီး ပါးရိုးတလျောက် Blush (သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ညှိပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ #Water Type Blusher , #6 SUNSET PEACH ADE
72763 Royal Honey Propolis Essence Cushion Spf45 pa++ 03 Sand Bege 15g (Original Price 43500)
( 03 Sand Beige--Mellow yellow base ) 33% Royal Honey Propolis Extract ပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားကို အစိုဓါတ် အပြည့်အဝထိန်းပေးနိုင် ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ကြမ်းရှသော အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေပြီး ROYAL HONEY PROPOLIS ESSENCE CUSHION သည်လိမ်းထားမှန်းမသိအောင် ပေါ့ပါးပြီး အသားအရေကိူ ကြည်လင်တောက်ပချောမွေ့စေကာ Glow Effect ကိူ ရရှိစေနိူင်ပါသည်။ ပျားရည်ကဲ့သို့ နူးညံ့သော အထိတွေ့ကို ခံစားရရှိနိုင်ပြီး နာရီပေါင်း ၃၀ အထိ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးကာ အရေပြားကို စိုပြည်တောက်ပစေပါသည်။ SPF45 PA++ ပါဝင်သောကြောင့် နေလောင်ဒဏ်မ
1810 Cabbage Oil Control Fluid For Men 125ml (For Oily Skin)(original Price 28500)
"Toner, Essence, Emulsion တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသောကြောင့် တစ်မျိုးထဲ သုံးရုံဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်အပြင် အစွမ်းကြောင့် အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးပြီး အသားအရေကိုညီညာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လုံလောက်သော ပမာဏတစ်ခုကို လက်ဖဝါးတွင်းသို့ထည့်ကာ မျက်နှာအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားစေရန် လိမ်းပေးရမည်။"
3581 Black Sugar Satin Full Cover Concealer #1 5G (Original Price 18500)
"Black Sugar, Rice Wine , Cedar Wood တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အသားအရေ၏ အစိုဓါတ်ကို ရရှိစေကာ တနေကုန်မပျက်ပဲ အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးပေးနိုင်ပါသည်။ဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပေးကာ အစိုဓါတ်ကို ရရှိစေသည့် high Coverage ရရှိစေသည့် Liquid Type Concealer ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မိမိအသုံးပြုလိုသည့် နေရာသို့ လက်ချောင်းလေးများ(သို့မဟုတ်) မိတ်ကပ် Sponge ၊ Brush များဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ "
79501 100% Pure Cotton Rounds (90pcs)
"၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း Cotton သားကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် နူးညံ့သောထိတွေ့မှုကို ရရှိစေနိုင်ပြီး အရေပြားအတွင်းရှိ အညစ်အကြေးကို စင်သွားအောင် သန့်စင်ပေးနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ Cotton Pad ကို ထုတ်ယူပြီး ချွေးပေါက်နှင့် မျက်နှာပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ကျန်ရှိနေသော အခြားမျက်နှာပြင်တဖက်ကိုလည်း ထပ်မံအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုစုပ်ယူပြီး ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။"
"၁၀၀ရာခိုင္နႈန္း Cotton သားကို အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ႏူးည့ံေသာထိေတြ႔မႈကို ရရွိေ
399-7 Wedge Puff (4ea)4Sponges, Each Spong has6sides, Smooth
"မည်သည့် အသားအရေအတွက်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည့် မိတ်ကပ်လိမ်းသော Sponge တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း Wedge Puff Sponge ကို Make Puff Sponge ကို Make Up Base ၏ Liquid Foundation များလိမ်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း Wedge Puff Sponge ၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ အနားမညီသော အချွန်ကလေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် မျက်ဝန်းအောက်ဖက်နှင့် မျက်ခမ်းဘေးနားသို့ မိတ်ကပ်များ ညီညာစေရန် အသေးစိတ် လိမ်းခြယ်ပေးနိုငခြင်း ၊ နှာခေါင်းဘေး တစ်ဖက်စီနှင့် နှုတ်ခမ်းထောင့်များအထိ မိတ်ကပ်သားဝင်ရောက်စေရန် တို့ကာ ထိထိရောက်ရောက် လိမ်းပေး
412-27 Soft Eyelash Curl (n) " Soft Silicone Pad, Two Refill Silicone Pad "
"Soft Eyelash Curl သည် မျက်တောင်ကော့ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မျက်တောင်လေးများကို သဘာဝအတိုင်း ကော့ညွှတ်စေရန် မျက်တောင်များကို ထိခိုက်မှု မရှိပဲ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ပါးလွှာသော Slim Frame ကိုယ်ထည်နှင့် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော ဆီလီကွန် Pad ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် မျက်တောင်များကျွတ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း တွန့်ခေါက်ခြင်း မရှိခြင်း၊ Refill Pad (၂) ခု ပါဝင်ခြင်းကြောင့် လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသည့်အားသာချက်များစွာရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- လက်ကိုင်ကွင်းပေါက်လေးမှ ကိုင်ကာ မျက်တော
386 Tweezers (Remove Small Hair)
"မျက်ခုံးမွှေးကို ညီညာလှပစေရန် နှုတ်ပေးနိုင်သည့် (Tweezers) ဇာဂနာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မျက်ခုံမွှေးတပင်ခြင်းကို သေသပ်စွာဖြင့် လွယ်ကူစွာ နှုတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ သေးငယ်သော Small Hair လေးများကို ထိမိစွာဖြင့် နှုတ်ပေးနိုင်ခြင်း စသည့်အားသာချက်များရှိပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိမိဖယ်ရှားလိုသော မျက်ခုံးမွှေးများကို တပင်ချင်း ထိမိစွာ ကိုင်တွယ်ပြီး အလွယ်တကူ နှုတ်ယူပေးနိုင်ပါသည်။"
"မ်က္ခံုးေမႊးကို ညီညာလွပေစရန္ ႏႈတ္ေပးႏိုင္သည့္ (Tweezers) ဇာဂနာျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ခံုေမႊးတပ
61-6 Black Sugar Perfect Bubble Foam 200ml (Skin Tigheting)
"Organic Brazilian Black Sugarဖြင့် အဓိက ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဗိုက်တာမင်အာဟာရဓါတ်များနှင့် ရေဓါတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်ပေးသည့်Cleansing Foam ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို အတွင်းပိုင်းထိသန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် အသားအရေကို စိုပြေတင်းရင်းစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ပမာဏအနည်းငယ်ကိုယူပြီး လက်ထဲတွင်ထည့်ကာ မျက်လုံးနှင့် နှုတ်ခမ်းနေရာတဝိုက်ကိုရှောင်ပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်ရေနွေးနွေးဖြင့်ဆေးချပေးပါ။ "
"Organic Brazilian Black Sugarျဖင့္ အဓိက ထုတ္လုပ္ထားျပီး ဗိုက္တာမင္အာဟာရဓါတ္မ်ားနွင့္
1907 Black Sugar Perfect Cleansing Cream 230ml
"Black Sugar ၊ Rice Wine နှင့် ဆေးဘက်ဝင် Botanical Oil တို့ပါဝင်သည့် Oil- Type Deep Cleansing Cream ဖြစ်ပြီး မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း မျက်နှာပြင်ကို နှိပ်နယ်ပေးနိုင်သည့် massaging Cream တစ်မျိုးလဲဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိမိလိုအပ်သောပမာဏကိုယူကာ မျက်နှာအနှံ့သို့ သုတ်လိမ်းကာ ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပြီး မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ရေခပ်နွေးနွေး နှင့် သစ်ပေးပြီးနောက် မျက်နှာသစ်ဆေးအသုံးပြုကာ ပြန်သစ်ပေးရပါမည်။"
1906 Black Sugar Perfect Scrub Foam 150ml
1903 Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X 210g
2273 Egg White Perfect Pore Cleansing Foam 150ml
"ကြက်ဥအနှစ်နှင့် Hot Spring Water တို့ကြောင့် ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပြီး အညစ်အကြေးနှင့် ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ အဆီများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ချွေးပေါက်မရှိသော အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ပမာဏအနည်းငယ်ကိုယူပြီး လက်ထဲတွင်ထည့်ကာ မျက်လုံးနှင့် နှုတ်ခမ်းနေရာတဝိုက်ကိုရှောင်ပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်ရေနွေးနွေးဖြင့်ဆေးချပေးပါ။"
"ၾကက္ဥအႏွစ္နွင့္ Hot Spring Water တို႔ေၾကာင့္ ေခြ်းေပါက္မ်ားကို က်ဥ္းေစျပီး အညစ္အေၾကးနွင့္ ေခ်ြးေပါက္အတြင္းရွိ အဆီမ်ားကို ဖယ္ရွားေပး
2276 Egg White Perfect Pore Cleansing Oil 200ml
"ကြက်ဥမှရရှိသော အာဟာရဓါတ် ( Egg Extract) နှင့် အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် 5RG- Pore Eraser ဖြစ်ပြီး - ထူထဲသော မိတ်ကပ်များကို အတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်း - အရေပြားအတွင်းမှ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်း - ဆားဝက်ခြံများကို သက်သာလျော့ပါးစေခြင်း - အသားအရေ နူးညံ့ဖြူဝင်းစေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- ခြောက်သွေ့သော မျက်နှာပေါ်သို့ Cotton Pad ဖြင့် အနည်းငယ်ယူကာ မျက်နှာအနှံ့သုတ်လိမ်းပြီး သန့်စင်ပေးပါ။ ဆားဝက်ခြံဖြစ်
2274 Egg White Perfect Pore Meringue Foam 200ml
"အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ ဗီတာမင် နှင့် ပရိုတင်းဓာတ် ကြွယ်ဝသော ကြက်ဥ ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေပြီး အဆီနဲ့ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် Meringue Foam အမြုပ်လေးတွေကြောင့် လန်းဆန်းစေခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောအသားအရေကို ခံစားရစေပြီး အစိုဓာတ် ပြည့်ဝစွာရရှိစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - စိုစွတ်နေသော မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ Egg White Perfect Pore Meringue Foam အနည်းငယ်ယူ၍ ညင်သာစွာ နှိပ်နှယ်ပေးကာ ရေနွေးနွေး (သို့) ရေအေးအေးဖြင့် ဆေးချပါ။"
"အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္မ်ား ဗီတာမင္ ႏွင့္ ပရိုတင္းဓာတ
71303 Fresh Green Pure Broccoli Cleansing Foam 120ml
"Broccoli Sprout Extract ကို အခြေခံကာ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် Sensitive Skin များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ - Cream မှ Foam Type မျက်နှာသစ်ဆေးဖြစ်သဖြင့် မျက်နှာသစ်ချိန်တွင် နူးညံ့သော ထိတွေ့မှုကို ခံစားရခြင်း - အစိုဓါတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခြင်း - အသားအရေကို နူးညံ့ကြည်လင်စေခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာသစ်ဆေးကို အနည်းငယ်ယူကာ လက်ဖဝါးထဲသို့ထည့်ပြီး ရေဖြင့် Foam ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ ပွတ်ပေးပြီးလျှင် ရေပြန်ဆေးချရန်လိုပါသည်။"
"Broccoli Sprout Extract ကို အ
384-1 Mild Silky Cotton
381-2 Milk Shake Point Make-up Remover ( Nutrition, Without Irritation ) 160ml
71100 - Milk Shake Point Make-up Remover (New)
3553 Rice Daily Brightening Cleansing Foam 150ml
"Odae Rice Bran Water ဆန်ဆေးရေနှင့် ဆန်အနှစ်မှ အခြေခံကာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသည့်အခါတွင် Bouncy Foam Type (ပူဖောင်း အမြှုပ်)လေးများကြောင့် - နူးညံ့သောထိတွေ့မှုကို ရရှိစေနိုင်ခြင်း - အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်း - အသားအရေကို ကြည်လင် လန်းဆန်းစေခြင်း - အသားအရောင် မညီညာသူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ စသည့် အကျိုးအာနိသင်များရရှိစေသည့် Foam တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-လက်ထဲသို့ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ဖြည်းညင်းစွာ ပွတ်ပေးကာ ရေဖြင့် ပြန်လည်ဆေးချပေးပါ။"
"Odae Rice Bran Wate
3552 Rice Daily Brighting Cleansing Water 300ml
Protein , Vitamin B နှင့် သတ္တုဓါတ်များကြွယ်ဝစွာပါဝင်သည့် rice bran water နှင့် အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ဆန်ဆေးရည်တို့ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို တောက်ပစေကာ အစိုဓါတ်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- Cotton Pad ထဲသို့ Cleansing Water ကို စိုစွတ်အောင် ထည့်ပြီး မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်သွားအောင် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
Protein , Vitamin B နွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ားၾကြယ္၀စြာပါ၀င္သည့္ rice bran water ႏွင့္ အခ်ဥ္ေဖာက္ထားသည့္ ဆန္ေဆးရည္တို႔ ေပါင္းစပ္
3556 Rice Daily Brighting Cleansing Tissue (80pcs)
"Odae Rice Bran Water မှ ဆန်ဆေးရည်နှင့် ဆန်အနှစ်ကို အခြေခံကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် Cleansing Tissue ဖြစ်သောကြောင့် - မိတ်ကပ်များကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း - နူးညံ့သောထိတွေ့မှုကို ခံစားရစေနိုင်ခြင်း - အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်း - စိုပြေတောက်ပသော အသားအရေရရှိစေခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်များရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-အထုတ်တွင် ပိတ်ထားသော Sticker ကိုခွာယူပြီး အတွင်းရှိ Cleansing Whipe Tissue ကို ယူကာ မျက်နှာပေါ်ရှိ မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖြည်းညင်းစွာ ပွတ်တိုက် သန့်စင်ပေးပါ။ မျက်
3554 Rice Daily Brightening Scrub Foam 150ml
"ဆန်ကို အခြေခံကာထုတ်လုပ်ထားသည့် Scrub တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသားအရေကြမ်းတမ်းမှုများ၊ ဆဲလ်သေများ၊ အညစ်အကြေးများနှင့် အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်းများကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိမိအသုံးပြုလိုသော ပမာဏကို အနည်းငယ်စိုစွတ်သောလက်ပေါ်တွင်ထည့်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ပွတ်ပေးနိုင်ပြီး ရေဖြင့်ပြန်လည်ဆေးကြောပေးနိုင်ပါသည်။"
"ဆန္ကို အေျခခံကာထုတ္လုပ္ထားသည့္ Scrub တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး အသားအေရၾကမ္းတမ္းမႈမ်ား၊ ဆဲလ္ေသမ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားနွင့္ အသားအေရမြဲေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ အသံုးျပဳပံု-မိမိအ
3654 Tea Tree Skin Clearing Bubble Foam 200ml
Tea Tree Leaf Extract 8%, Tea Tree Oil , Soothing Herb Extract တို့ပါဝင်ပြီး Sensitive ဖြစ်သောအသားအရေနှင့် နီရဲတတ်သော အသားအရေရှိသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်သည့် Cushiony Bubble Cleansing Foam ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မျက်နှာကို ဦးစွာအစိုဓါတ်ရရှိစေရန် ရေဆွတ်ပေးပြီး မိမိလိုအပ်သော ပမာဏကို Pump မှ ညှစ်ထုတ်လိုက်သည့်အခါ အမြှုပ်ကလေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ရေဖြင့် ပြန်ဆေးချနိုင်ပါသည်။
Tea Tree Leaf Extract 8%, Tea Tree Oi
3641 Vege Garden Cleansing Foam Wild Berry 150ml
"ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံမှရရှိသော သဘာဝဓါတ်များနှင့် Berry သီးမှရရှိသော ဓါတ်များပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက် အသားအရေကိုကြည်လင်စေပါသည်။ Moisture ပါဝင်သည့်အတွက်အစိုဓါတ်ကို အသုံးပြုပြီးသည့်အခါ ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွလာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ မိမိအသုံးပြုမည့် ပမာဏကိုယူပြီး နူးညံ့ညင်သာစွာ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးလျှင်ရေနွေးနွေးဖြင့်ဆေးချပေးပါ။"
"ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ိဳးစုံမွရရွိေသာ သဘာဝဓါတ္မ်ားႏွင့္ Berry သီးမွရရွိေသာ ဓါတ္မ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္အတြက္ အသားအေရကိုၾကည္လင္ေစပါသည္။ Moisture ပါ
3643 Vege Garden Cleansing Foam Mugwort 150ml
" Mugwort တွင် သန့်စင်သော vitamin A & C ပါဝင်သည်။ - အသားရေအတွင်းပိုင်းထိ သန့်စင်ပေးကာ အစိုဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ - Breakout များကို သက်သာစေပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ Oily Skin များနှင့် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ မိမိအသုံးပြုမည့် ပမာဏကိုယူပြီး နူးညံ့ညင်သာစွာ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးလျှင်ရေနွေးနွေးဖြင့်ဆေးချပေးပါ။"
" Mugwort တြင္ သန႔္စင္ေသာ vitamin A & C ပါဝင္သည္။ - အသားေရအတြင္းပိုင္းထိ သန႔္စင္ေပးကာ အစိုဓာတ္ကို အျပည့္အဝျဖည့္တင္းေပးပါသည္။ - Breakout
896 Pineapple Peeling Gel 100ml (Exfoliating)
"ပန်းသီးမှရရှိသော ဆဲလူးလို့စ်နှင့် AHA များနှင့် နာနတ်သီး၊ ရှားစောင်းလက်ပက်တို့အဓိကပါဝင်သောကြောင့် မျက်နှာအသားအရေကို နူးညံ့စေကာ နေလောင်အမဲကွက်များကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများနှင့် ကြည်လင်သန့်ရှင်းသော အသားအရေကို ပြန်လည်မွေးမြူပေးနိုင်သည့် Peeling Gel ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ မိမိအသုံးပြုမည့် ပမာဏကိုယူပြီး အညစ်အကြေးများ ထွက်လာသည် အထိ နူးညံ့ညင်သာစွာ မျက်နှာ အနှံ့ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်ရေဖြင့်ဆေးချပေးပါ။ "
"ပန္းသီးမွရရွိေသာ ဆဲလူးလို႔စ္ႏွင့္ AHA မ်ားႏွင့္ နာ
70804 - Black Sugar Perfect First Serum 100% Pure Cotton Clear Pad
71205 - Garden Bean Gentle Balm Cleanser
71206 - Garden Bean Gentle Serum Cleanser
71207 - Garden Bean Gentle Bubble Foam Cleanser
21008 Mint sparkling foot scrub 100ml
နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်သော ခြေထောက် scrub ဖြစ်ပြီး အညစ်အကြေးများ၊ ဆဲလ်သေများကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ အေးမြတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးပြီး ခြေအနံ့ဆိုးများကိုလည်း သက်သာစေသည်။ exfoliates, Refreshes, Perfumes feet ရစေသော3in 1 foot scrub ဖြစ်သည် ။ အသုံးပြုပုံ အနည်းငယ် ညစ်ထုတ်ပြီး စိုနေတဲ့ ခြေထောက်ပေါ်သို့ ညင်သာစွာပွတ်နိတ်ပေးပါ ။ပိုညစ်ပေသောနေရာ၊ အသားမာများသောနေရာသို့ ပိုအသုံးပြုပေးပါ၊ ပြီးလျှင် ရေဆေးချပါ။
2178 Aloe Watery Sun Daily Spf50+pa+++ 100ml
"ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အရောင်းရဆုံး ပစ္စည်းထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး Aloevera အစွမ်းကြောင့် နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ညိုမည်းခြင်းကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ SPF 50 ++ ဖြစ်သည့်အတွက် UV ဒဏ်ကြောင့် အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး Moisturizer ပါဝင်သည့်အတွက် အရေပြားကို စိုပြေစေပါသည်။ အလွယ်တကူစိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး စေးကပ်မှုမရှိသည့်အတွက် သုံးစွဲရာတွင် အဆင်ပြေစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-နေ့စဉ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မျက်လုံးတဝိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ရှားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လိမ်းပြီး အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၀ခန့
2177 Aloe Watery Sun Waterproof Spf50+ Pa+++ 50ml
"Aloe Vera Extract ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်သည့် SPF 50 + PA +++ ပါဝင်သော Sun Screen ဖြစ်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းပေး ကာ နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး Waterproof ဖြစ်သည့် Cream ပုံစံ ဖြစ်ပါသည်။ ရေကူးနေသည့် သူများနှင့် နေရောင်ထဲသို့ အမြဲထွက်နေရသူများမဖြစ်မနေ အသုံးပြုသင့် ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်ကို ရှောင်ရှားပြီးနေ့စဉ် မိမိပြုလုပ်နေကျ Skin Care အဆင့်များ ပြီးသည့်နောက်တွင် ၎င်း Cream ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ နေပူထဲသို့ မထွက်မီ ၁၅မိနစ်ခန့်ကြိုတင်လိမ်းပေးပြီးမှ နေပူထဲသ
3532 Sun Flower No Sebum Sun Gel Spf50+ Pa++++50ml
"နေကြာစေ့ဆီတွင် Vitamin E နှင့်အခြားသော အာဟာရဓါတ်များပါဝင်ခြင်းကြောင့် အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးကာ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Fresh Gel ပုံစံ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်သည့် SPF 50 + PA +++ ပါဝင်သော Sunscreen ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- Skin Care Step ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အသုံးပြုနိင်ပြီး နေရောင်ထဲသို့ မထွက်မီ ၁၅မိနစ်အလိုတွင် ကြိုတင်ကာ မျက်နှာနှင့် ခန္ဒာကိုယ်ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးမပြုမီ ဗူးကို နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်ခန့် လှုပ်ပေးရပါမည်။"
"ေနၾကာေစ့ဆီတြင္ Vitamin E ႏွင့္အျခားေသာ အာဟ
72601 All Day Berry Deep Moist Sun 50g (For Dry Skin)
Raspberry သီးအရွက်ရဲ့ Stem cell ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အစိုဓာတ် ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Vitamin C နှင့် phenols ပါဝင်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အမာရွတ်နှင့် အမဲစက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ တစ်နေ့လုံး စိုပြည်တင်းရင်းစေကာ အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေသည်။ SPF 50+ PA ++++ ပါဝင်တာကြောင့် နေရောင်ခြည်ကို အထူးကာကွယ်ပေးသည်။ Organic Sunscreen ဖြစ်သောကြောင့် အရေပြားအတွက်အန္တရယ်ဖြစ်စေနိုင်သော UV rays များကို စစ်ထုတ်ကာ အရေပြားကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အသားခြောက်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်သည်
72602 All Day Berry More Safe Sun 50g
Sensitive skin များနှင့် အသားခြောက်လွန်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်သော အသားအရေရှိသူများ အတွက် အထူးသင့်တော်သည်။
Raspberry သီးအရွက်ရဲ့ Stem cell ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အစိုဓာတ် ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပြီး Vitamin C နှင့် phenols ပါဝင်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အမာရွတ်နှင့် အမဲစက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အသားအရေကို တင်းရင်းစေကာ အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေသည်။ 100% organic စစ်စစ် ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် EWG လက်မှတ် ရရှိထားသည်။ Physical Sunscreen ဖြစ်သောကြောင့် UV rays များကို အထ
72603 All Day Berry So Waterful Sun 50g (For Oily And Combination Skin)
Raspberry သီးအရွက်ရဲ့ Stem cell ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အစိုဓာတ် ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Vitamin C နှင့် phenols ပါဝင်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အမာရွတ်နှင့် အမဲစက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ တစ်နေ့လုံး စိုပြည်တင်းရင်းစေကာ အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေသည်။ SPF 50+ PA ++++ ပါဝင်တာကြောင့် နေရောင်ခြည်ကို အထူးကာကွယ်ပေးသည်။ Organic Sunscreen ဖြစ်သောကြောင့် အရေပြားအတွက်အန္တရယ်ဖြစ်စေနိုင်သော UV rays များကို စစ်ထုတ်ကာ အရေပြားကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Gel type ဖြစ်သောကြောင့် လိမ်းချယ်ရ ပေါ့ပါ
62 - Black Sugar Mask Wash Off 100g (Powerful Scrub)
"Organic Brazilian Black Sugar မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး - အညစ်အကြေးများနှင့် ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း - အသားအရေစိုပြေချောမွတ်စေသည့် အာဟာရဓါတ်များစွာပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် အသားအရေကို ဝင်းပစိုပြေစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာကိုသန့်စင်ပြီးနောက် စိုစွတ်နေသော မျက်နှာအသားအရေ (သို့) ရေ၊ Micellar Water နှင့်ရောစပ်ပြီး မျက်လုံးနှင့် နှုတ်ခမ်းနေရာများကို ရှောင်ကာ မျက်နှာပေါ်တွင်သုတ်လမ်းပေးပါ။ ဆယ်မိနစ်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ်အထိ ထားပြီး ရေနွေးနွေးဖြင့်ဆေးချပါ။"
62-13 Black Sugar Strawberry Mask Wash Off 100g (Exfoliating And Moisturizing)
83-11 Egg White Pore Mask 125g ( For Pore Skin, Rich In Amino Acids & Vitamins )
"ကြက်ဥကို အခြေခံကာထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ကြက်ဥတွင် ပရိုတင်း၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် ဗီတာမင်များစွာပါဝင်သည့်အတွက် ချွေးပေါက်များတွင် ပိတ်ဆို့နေသော အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးကာ ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး မျက်နှာအသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သလောက်ပမာဏကို လက်ဖြင့်ယူကာ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မျက်ဝန်းနှင့် နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ကို ရှောင်ရှားကာ အနှံ့လိမ်းပေးပြီး မိနစ် 10-15 မိနစ်ခန့်ကြာလျှင် ကြက်သီးနွေးရေဖြင့် ပြန်လည်ဆေးကြောပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။"
3551 Rice Daily Brightening Mask Wash Off 100g
"ဆန်ကို အခြခံကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် မျက်နှာသန့်စင်သည့် Mask တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆန်တွင်ပါဝင်သော သဘာဝဓါတ်များက အသားအရေကို ကြည်လင်ကောင်းမွန်စေရုံမက ဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အညစ်အကြေးများ ကင်းစင်စေကာ ဝင်းလက်တောက်ပစေပါသည်။ ပုံမှန် အသားအရေရှိသူများနှင့် အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ (အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ) အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သလောက်ပမာဏကို လက်ဖြင့်ယူကာ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မျက်ဝန်းနှင့် နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ကို ရှောင်ရှားကာ အနှံ့လိမ်းပေးပြီး မိနစ် 10-15 မိနစ်ခန့်ကြာလျှင် ကြက်
63 Rice Mask Wash Off 100g
"ဆန်စေ့မှထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို အေးမြစေသည့်အပြင် မျက်နှာအသားအရေကို နူးညံ့ဖြူဝင်းစေပါသည်။ဆန်စေ့မှထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆန်ဆေးရေမှ ရရှိသော အာဟာရဓါတ်များကြောင့် - အသားအရေကို အေးမြစေခြင်း - ဖြူစင်ဝင်းမွတ်စေခြင်း - အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနိင်ပြီး ပုံမှန်အသားအရေရှိသူများနှင့် အသားအရေခြောက်သွေ့သူများအတွက်အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာကိုသန့်စင်ပြီးနောက် စိုစွတ်နေသော မျက်နှာအသားအရေ (သို့) ရေ၊ Micellar Water နှင့်ရောစပ်ပြီး မျက်လုံးနှ
50016 (Eu) Freshmade Coconut Mask 90ml (Elastic Moisture, Hydrating , Firming Facial Sleeping Mask, Smooth & Resilient Skin)
" Coconut Milk တွင် ဗီတာမင်စီ ပါ ဝင်ပြီး အရေပြား၏ elasticity ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အတွက် အရေးအကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ လျော့ပါး သက်သာစေပါသည်။ ၎င်းအပြင် အစက်အပြောက်များကို သက်သာစေပြီး Gel Type ဖြစ်သည့်အတွက် လိမ်းလိုက်လျှင် စိမ့်ဝင်လွယ်ပြီး ပေါ့ပါးစေကာ အုန်းသီးရနံ့ သင်းပျံ့ နေစေပါသည်။ အုန်းရည်၏ အစွမ်းကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ အသားအရေကို လန်းဆန်းစေပြီး အသားအရေခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို သက်သာစေကာ အသားအရေကိုကြည်လင်စေပြီး တင်းရင်းစေပါသည်။ Glycerin ပါဝင်မှုကြောင့် ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းနေသော အသားအ
72501 Lavender Food Mask 120g
72502 Apricot Food Mask 120g
Sensitive skin များနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်သော အသားအရေရှိသူများ အတွက် လည်း သင့်တော်သည်။(ance)
(Trouble Soothing mask) 10% Aprricot Fruit Extrct ပါဝင်သောကြောင့် ဆဲလ်သေများနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဆုပ်ယူပြီး ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ ချိုသာသော မွှေးရနံ့ ရှိပါသည်။Creamy type ဖြစ်သောကြောင့်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စွာစိုစွတ်စေပါသည်။ Sensitive skin များအတွက် အထူးသင့်တော်သည်။ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်းမှာပါ လွယ်ကူစွာ သုံးနိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ ရေဆေးချနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သောပမာဏ
72503 Pear Mint Food Mask 120g
မျက်နှာပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားလိုသူများအတွက် သင့်တော်သည်။
(Skin Clearing Mask) 10% Pear fruit extract ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေအတွက် လိုအပ်သော အစိုဓာတ်နှင့် အာဟာရဓာတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ ဆဲလ်သေများနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဆုပ်ယူပြီး ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ Clay Wash off mask type ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပုံ - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သောပမာဏကိုယူကာ မျက်လုံး နှင့် နှုတ်ခမ်း တဝိုက်ကို မထိခိုက်စေပဲ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး Mask အနေဖြင့် အသုံးပြုလိုပါက အနည်းဆုံး5မိနစ် မှအများဆုံး 10 မိနစ်အထိ အသ
72504 Honey Sugar Food Mask 120
ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားလိုပြီး အသားအရေကို အာဟာရ ဖြည့်တင်းလိုသူများအတွက် သင့်တော်သည်။
(Moisturing and Exfoliating mask) New Zealand ရဲ့ Manuka honey + Acacia Honey 9.29% နှင့် Black Sugar 24% ပါဝင်ပါသည်။ Manuka honey + Acacia Honey ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီး အိုမင်းရင့်လျော်မှုကို လျော့ပါးစေသည်။ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ အသားအရေကို အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးကာ လိုအပ်သော အာဟာရများကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ နူးညံ့သော Scrub type အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်းမှာပါ လွယ်ကူစွာ
72505 Strawberry Sugar Food Mask 120g
ချွေးပေါက်တွင်းရှိ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားလိုပြီး ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားလို သူများအတွက် သင့်တော်သည်။
(Pore Cleansing Mask) Strawberry သီးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး Black Sugar 36% ပါဝင်သောကြောင့် ချွေးပေါက် အတွင်းရှိ အညစ်အကြေးများနှင့် ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ နူးညံ့သော Scrub type အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်းမှာပါ လွယ်ကူစွာ သုံးနိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ ရေဆေးချနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လိုအပ်သောပမာဏကိုယူကာ မျက်လုံး နှင့် နှုတ်ခမ်း တဝိုက်ကို မထိခိုက်စေပဲ အသုံးပြ
3351 Black Sugar Perfect Toner 2x For Men 180ml
"Black Sugar နှင့် Rice Wine တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ရေဓါတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးကာ အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွတ်စေသည့် အမျိုးသားသုံး Toner ဖြစ်ပါသည်။ ချွေးပေါက်နှင့် အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေပြီး အသားအရေကြမ်းတမ်းခြင်းများနှင့် Irritation ဖြစ်ခြင်းကို လျော့ချပေးနိုင်သည့် အာနိသင်ရှိပါသည်။ Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects. အသုံးပြုပုံ- မျက်နှာပြင်ကို သန့်စင်ပြီးသည့်နောက်တွင် လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။"
3352 Black Sugar Perfect Emulsion 2x For Men 150ml
"Black Sugar နှင့် Rice Wine တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး အရေးအကြောင်းများကို လျော့ချပေးကာ အသားအရေ အစိုဓါတ်ကို ရရှိစေပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသည့် အမျိုးသားသုံး Emulsion ဖြစ်ပါသည်။ Skin-Brightening and Anti-Wrinkle Effects အသုံးပြုပုံ- Toner အသုံးပြုပြီးနောက် မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းတလျောက်ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
1809 Betula Alba Juice Moisture Fluid For Men 125ml
" အမျိုးသားများအတွက်အသုံးပြုရန် Betula Alba Leaf မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသားအရေ ကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းညိုမွဲခြင်းများနှင့် အရေပြားကို အစိုဓါတ်ရရှိစေရန် Toner ၊ Essence ၊ Emulsion တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသည့် Fluid ဖြစ်သောကြောင့် ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းသောအသားအရေနှင့် ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် လုံလောက်သော ပမာဏတစ်ခုကို လက်ဖဝါးတွင်းသို့ထည့်ကာ မျက်နှာအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားစေရန် လိမ်းပေးရမည်။"
1810 Cabbage Oil Control Fluid For Men 125ml (For Oily Skin)
72801 Carrot Carotene Relief Cream 55ml (For Females Ages 20-35)
Carrot မှာ ပါဝင်တဲ့ B-carotene ဓာတ်က့ အသားအရေကို ၂၄ နာရီတိုင်အောင် အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Sensitive Skin များအတွက် အထူးသင့်တော်သည်။လိမ်းပြီးသည်နှင့် ချောမွေ့ ကာ အစိုဓာတ်ကို ခံစားရနိင်သည်။ Chemical လုံးဝမပါဝင်တာကြောင့် "Vegan Society" လက်မှတ်ကို ရရှိထားပါသည်။
72802 Carrot Carotene Calming Water Pad 250g / 60 Sheet (For Females Ages 20-35)
Carrot မှာ ပါဝင်တဲ့ B-carotene ဓာတ်က့ အသားအရေကို ၂၄ နာရီတိုင်အောင် အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Sensitive Skin များအတွက် အထူးသင့်တော်သည်။ Chemical လုံးဝမပါဝင်ပါ မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် ခြောက်သွေ့သော အရေပြားပေါ်တွင် PAD ကို (5min မှ10min) ခန့် ထားပါ။လိမ်းပြီးသည်နှင့် ချောမွေ့ ကာ အစိုဓာတ်ကို ခံစားရနိင်သည်။ တစ်ဘူးတွင် (60)sheet ပါဝင်သည်။
2693 Aqua Grape Bounce Mist Toner 155ml (For Dry To Combination Skin)
"ပင်လယ်ရေအောက်မှရရှိသော စပျစ်သီး (Aqua grape) များတွင် ဗီတာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေပါသည်။ ၎င်းပင်လယ်စပျစ်သီးလေးများ၏ အစွမ်းဖြင့် ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို အေးမြစေပြီး ရေဓာတ်အပြည့်အဝ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ Fucoidan လို့ လူသိများ၍ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲ အလေ့ကျပေါက်သော အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရွက်တစ်မျိုးကြောင့် မျက်နှာပေါ်ရှိ မလိုလားအပ်သော Virus ပိုးများကို သေစေပြီး အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည် Spary Type မို့ ဖြန်းလိုက်တာနဲ့ အသားထဲ လျင်မြန်စွာစိမ့်
2691 Aqua Grape Bounce Bubble Serum 120ml
"ပင်လယ်ရေအောက်မှရရှိသော Deep Sea Water 10 % နှင့် စပျစ်သီးစိမ်းလေးများကဲ့သို့ခပ်ဆင်ဆင်တူသည့် ပင်လယ်ရေအောက်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သော Sea Grapes Bubbles Extract 40 %ဖြင့် ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် - မျက်နှာအသားအရေအတွက်လိုအပ်သော အစိုဓါတ်ကို ရရှိစေခြင်း၊ Antioxidant ကြွယ်ဝခြင်း၊ ရေမှော်အစွမ်းကြောင့် Moisture အပြည့်အဝရရှိစေခြင်း၊ ရေဓါတ်ကိုဖြည့်ပေးခြင်း၊ အသားအရေကို စိုပြေဝင်းမွတ်တင်းရင်းစေခြင်း၊ Bubble Type Serum ဖြစ်သောကြောင့် အိတုန်နူးညံ့စေသော ထိတွေ့မှုရှိခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေသည့်
2692 Aqua Grape Bounce Essence Lotion 120ml
"Aqua Grape Extract 40% ၊ Deep Sea Water 10% ပါဝင်ပြီး အစိုဓါတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ပေးနိုင်သည့် Ingredient များ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားအလွှာများ၏ အတွင်းပိုင်းအထိ စေးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိပဲ အစိုဓါတ်ကို စုပ်ယူထားပေးနိုင်သည့် Moisturizing Essence Lotion ဖြစ်ပါသည်။ အရေပြားအလွှာ၏ အောက်ဆုံးဖြစ်သည့် Basic Layer အထိ စိမ့်ဝင်နိုင်သည့် Lotion ဖြစ်သောကြောင့် လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး အေးမြသော ခံစားမှုကို ရရှိစေနိုင်သည့် အပြင် Moisturizing Gel Type မှ ရေစက်လေးများအသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည့် ပုံစံဖြင့
70206 - Black Pomegranate Energy Toner
70207 - Black Pomegranate Energy Emulsion
70208 - Black Pomegranate Energy Serum
70209 - Black Pomegranate Energy Cream
70107 - GOLD CAVIAR EX TONER
70108 - GOLD CAVIAR EX EMULSION
70109 - GOLD CAVIAR EX LIFTING EYE SERUM
70110 - GOLD CAVIAR EX SERUM
70111 - GOLD CAVIAR EX CREAM
3361 ROYAL HONEY PROPOLIS ENRICH TONER 160ml
3363 ROYAL HONEY PROPOLIS ENRICH ESSENCE 50ml
3364 ROYAL HONEY PROPOLIS ENRICH CREAM 63ml
3365 ROYAL HONEY PROPOLIS ENRICH SLEEPING PACK 80ml
"ပျားရည်တွင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အစိုဓါတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်သည့် အပြင် အရေပြားပေါ်တွင် ကပ်ညိနေနိုင်သည့် ရောဂါပိုးများကို ပိုးသတ်ပေးနိုင်သည့် အာနိသင်များစွာရှိပြီး - Royal Honey Propolis Enrich Sleeping Mask သည် အိပ်ပျော်နေချိန်တွင် ခနတာရပ်တန့်နေသော အရေပြားကို အားဖြစ်စေသည့် အရာများကို ပိုမိုအားဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း - ပျားဖယောင်းကဲ့သို့သော အစေးများက အစိုဓါတ်ကို တညလုံးထိန်းပေးထားနိုင်ခြင်း - အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်တတ်သော Skin Barrier များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း - Anti – aging Effect ကို
3368 ROYAL HONEY PROPOLIS ENRICH MIST 145ml
"Propolis Extract ပါဝင်သောကြောင့် ခြောက်သွေ့သော အသားအရေအတွက် အရေပြားအာဟာရနှင့် ရေဓါတ်ကို အလွှာနှစ်လွှာအထိ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး တနေကုန်တာရှည်ခံကာ အရေများကို အေးမြလန်းဆန်းစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-အသုံးမပြုခင် ပုလင်းကို လှုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် မျက်လုံးကို မှိတ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်နှင့် ဗူးကို 20 cm အကွာတွင်ခွာထားကာ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဖြန်းပေးနိုင်ပါသည်။"
1903-1 BLACK SUGAR PERFECT RESET CREAM 60ml
"အရေပြားဆရာဝန်များကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပြီး သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သော Black Sugar ကြောင့် မျက်နှာအသားအရေ နူးညံ့စေခြင်း အရေးကြောင်းများသက်သာစေခြင်း နှင့် အသားအရေ မညီညာပဲ ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေများကို အစိုဓာတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးပြီး တောက်ပစေပါသည် ထို့အပြင် PHA က Dead Cell များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်"
3451 BLACK SUGAR PERFECT FIRST SERUM THE ESSENTIAL 120ml
"မည်သည့်အသားအရေနှင့်မဆို သင့်တော်ပြီး Black Sugar နှင့် ကိုရီးယား Traditional Wine တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသားအရေကို ကြည်လင်စေပြီး အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့်အပြင် အစိုဓါတ်ကိုရရှိစေပြီး ဆဲလ်သေများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ Toner ပုံစံ Serum ဖြစ်ပြီး အသားအရေထဲသို့ လွယ်ကူစွာစိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်းကြောင့် အာနိသင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း စသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ 60 Cotton Pads ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုပုံ-အသုံးမပြုခင် ပုလင်းကို လှုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာကို သန့်ရှင်းစွာဆေးကြောပြီးနောက် Cot
3452 BLACK SUGAR PERFECT FIRST SERUM THE MILD 120ml
"Sensitive သမားများအတွက်အထူးသင့်တော်သည့် Toner Base Serum ဖြစ်ပြီး သဘာ၀ Organic Black Sugar နှင့် ကိုရီးယားရိုးရာ Wine တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် - အသားအရေကို ကြည်လင်ချောမွေ့စေခြင်း - ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း - ယားယံခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်ခြင်း - စေးကပ်မှုနည်းပါးပြီး လိမ်းထားမှန်းမသိသာခြင်း စသည့် အာနိသင်များရရှိစေပါသည်။ 60 Cotton Pads ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုပုံ-အသုံးမပြုခင် ပုလင်းကိုလှုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာကို သန့်ရှင်းစွာ ဆေးကြောပြီးနောက် Cotton Pad ( အဖုလေးများပါသော မျက်နှာပြင်ဖြင့်) ညင်
3453 BLACK SUGAR PERFECT FIRST SERUM THE LIGHT 120ml
"Conbination Skin နှင့် Oily Skin အဆီပြန်သည့် အသားအရေရှိသူများအတွက် သင့်တော်သည် Toner Base Serum ဖြစ်ပြီး သဘာ၀ Organic Black Sugar နှင့် ကိုရီးယားရိုးရာ Wine တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် - ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေခြင်း - အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် Age Spot များကို လျော့ကျစေခြင်း - အသားအရေကို ကြည်လင်ချောမွေ့စေခြင်း - အရေးအကြောင်းများကိုသက်သာစေခြင်း စသည့် အာနိသင်များရရှိစေပါသည်။ 60 Cotton Pads ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုပုံ-အသုံးမပြုခင် ပုလင်းကိုလှုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာကို သန့်ရှင်းစွာ ဆေးကြောပြ
3661 BLACK RASPBERRY FIRMING EYE CREAM 25ml
Black Raspberry Extract 5% နှင့် ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖု ၁၂မျိုးမှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များပါဝင်သည့် Anti- Wrinkle Eye Cream ဖြစ်ပြီး မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အရေပြားပါးသူများနှင့် Sensitive ဖြစ်တတ်သူများအတွက်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ Anti Oxidant များကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အရေပြားကို တင်းရင်းစေပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ထောပတ်ပုံစံ စေးကပ်ကပ်နှင့် ခပ်ပျစ်ပျစ် ခရင်မ်ပုံစံမျိုးရှိပြီး အသုံးပြုသည့်အခါတွင် မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်ရှိ အရေးအကြောင်းများဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အရေပြားကိုချောမွေ့တောက်ပစေကာ အရေပြားကို တင်းရင်းစေန
70705 - AVOCADO RICH TONER
70706 - AVOCADO RICH EMULSION
70707 - AVOCADO RICH ESSENCE
70708 - AVOCADO RICH CREAM
70907 LETTUCE & CUCUMBER WATERY ESSENCE 40ml
အဆီပြန်သူ၊ ဝက်ခြံသမား၊ အစိုဓာတ်ပြည့်ဝချင်သူများ၊ နွေရာသီတွင် အသားအရေ အေးမြကြည်လင်ချင်သူများ
"Lettuce Extract 10 %, Cucumber Extract 10 % နှင့် Cucumber Water 30% ပါဝင်သော Essence ဖြစ်သော ကြောင့်ရေဓာတ်ကို အတွင်းပိုင်းအထိ ရရှိစေနိုင်ခြင်း အသားအရေအသစ်တဖန်ကောင်းမွန်စေပြီး အသားခြောက်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ခြင်း စသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။Vitamin A ပါဝင်တာကြောင့် ဆဲလ်သစ်များကို မွေးဖွားပေးပြီး အသားအရေအသစ်တဖန်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ စသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ Vitamin C နှင့် Vitamin E ပါဝင်တာကြ
71005 - PEACH COTTON TONER
71006 - PEACH COTTON EMULSION
71007 - PEACH COTTON JUICY CREAM
71008 - PEACH COTTON FUZZY CREAM
31051 (USA)SKINFOOD PEACH SAKE PORE SERUM(N) 45ml
"ဂျပန် ဆန်ဝိုင် နှင့် မက်မွန်သီးတို့ ပေါင်းစပ်ထားသည် လိမ်းလိုက်လျှင် စိမ့်ဝင်လွယ်ပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ကို ကျဉ်းစေပါသည်။ အသားအရေကို နူးညံ့ စိုပြေစေပြိး အရေပြားအတွင်းလွှာထိ ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - Toner အသုံးပြုပြီးနောက် အပေါ်မှ ထပ်မံ လိမ်းပေးရမည်။"
31050 (USA) PEACH SAKE EMULSION(N) (Pore care) 135ml
"Peach Sake Emulsion တွင် ဗီတာမင်အေနှင့်ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး၊ သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါဝင်သည့်အတွက် ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် နှင့်ဝက်ခြံအမာရွတ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင် ပေးနိုင်ပါသည်။ မက်မွန်သီးတွင်တွေ့ရသော အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်သည် အသားအရေကို နုပျိုစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မူကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ pectin သည် အမျှင်ဓာတ်အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်စေပါသည်။ ဂျပန်ရှိရိုးရာ ဆန်မှပြုလုပ်သော ဝိုင် Sake သည် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် အသားအရေကိုသန့်ရှင်းစေပြီး sebum ထုတ်လုပ်မှုကို ကျဆင်းစေသ
72308 - PANTOTHENIC WATER PARSLEY MILDFOAM
72307 - PANTOTHENIC WATER PARSLEY SILENCE ESSENCE
72306 - PANTOTHENIC WATER PARSLEY SMASHING POWDER
72305 - PANTOTHENIC WATER PARSLEY TONER
70605 Tomato Brightening Toner 140ml
Can use day and night. For dull and dark skin. It isanon- sticky brightening product
10 % Tomato Extract အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်တာကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Vitamin C နှင့် E ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။ အစိုဓာတ်ပြည့်ဝမှုကို ခံစားရစေနိုင်သည်။ Brightening effect ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို ပိုမို ကြည်လင်တောက်ပစေနိုင်ပြီး နေလောင်ဒဏ်၊ အမဲစက်များကို လျော့ပါးစေသည်။ UV Rays ကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေ ကို ပြန
70606 Tomato Brightening Emulsion 140ml
20 % Tomato Extract အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်တာကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Vitamin C နှင့် E ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။ အစိုဓာတ်ပြည့်ဝမှုကို ခံစားရစေနိုင်သည်။ Brightening effect ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို ပိုမို ကြည်လင်တောက်ပစေနိုင်ပြီး အမဲစက်များကို လျော့ပါးစေသည်။ UV Rays ကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေ ကို ပြန်လည်ကောင်းမွ
70607 Tomato Brightening Essence 45ml
"30 % Tomato Extract ်အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်တာကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Vitamin C နှင့် E ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။ အစိုဓာတ်ပြည့်ဝမှုကို ခံစားရစေနိုင်သည်။ Brightening effect ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို ပိုမို ကြည်လင်တောက်ပစေနိုင်ပြီး နေလောင်ဒဏ်၊ အမဲစက်များကို လျော့ပါးစေသည်။ UV Rays ကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေ ကို ပြ
70608 Tomato Brightening Cream 60ml
Vitamin C နှင့် 20 % Tomato Extract တို့ ပါဝင်သော Cream ဖြစ်သောကြောင့် - နေလောင်ကွက်၊ အမဲစက်များကို သက်သာစေခြင်း - အသားအရေကြည်လင်တောက်ပစေပြီး နူးညံ့ ချောမွေ့စေခြင်း စသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-Serum (သို့မဟုတ်) Emulsion အသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင် လက်ထဲသို့ သင့်တော်သည့် ပမာဏကိုယူကာ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအနှံ့စိမ့်ဝင်သွားသည်အထိ လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။(ဘူးအဖုံးဖွင့်ပြီး ၁၂လ အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)
2241 Tomato Milky Shine Cream (For Brightening Effect) 50ml
"ခရမ်းချဉ်သီးမှ ရရှိသော အဆီအနှစ်တွေများမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အမဲစက်၊ အမာရွတ် နှင့် အသားအရောင် မညီညာခြင်းများကိုပါ ပြုပြင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်များကိုလဲ ထိန်းညှိပေးပါသည်။ ထို့အပြင်အရေပြားယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း များကို မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။ မိတ်ကပ်သား အနည်းငယ်ပါဝင်သော ကြောင့် မိတ်ကပ်မလိမ်းလိုပဲ သဘာဝကျကျ ပြောင်ပြောင်ကြည်ကြည်လေး ဖြစ်ချင်သူများအတွက် ၃၆၅ ရက်လုံး ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ အသားအရေရရှိနိုင်ဖို့ အထူးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါသည်"
70501 Royal Honey Essential Toner 180ml
"Goheung Yuja Extract 60 % ခန့်ပါဝင်သည့် Brightening Cream ဖြစ်ပြီး Lemon ထက်သုံးဆခန့် Vitamin C ကြွယ်ဝသော Yuja သီးမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းနှင့် Ampoule များပါဝင်သောကြောင့် - အမဲစက် (Dark Spot) များကို လျော့ပါးစေပြီး အသားအရောင် ညီညာလှပစေခြင်း - Yuja Extract နှင့် Niacianamide ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်စေခြင်း - Glow Skin ကို ရရှိစေပြီး အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းမွတ်စိုပြေစေခြင်းစသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာသစ်ပြီးချိန်တွင် လက်ထဲသို့ အနည်းငယ်ထည့်ကာ မျက်နှာအနှံ့ ဖြည်းညင်းစွာ လိမ်း
70504 Royal Honey Essential Queen's Serum 50ml
"Queen’s Multi Nutri TM နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး သက်တမ်းရင့် ပျားရည် Royal Aged Honey ပါဝင်ကာ Propolis Extract, Royal Jelly , Royal Jelly Protein နှင့် Aged Honey တို့ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် - အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေခြင်း - အသားအရေ ချောမွေ့ကြည်လင်စေခြင်း - အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်ပေးခြင်း - Collagen ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း - အသားအရေ နီမြန်းယောင်ရမ်းခြင်းများကို လျော့ပါးစေခြင်း - အသားခြောက်သူများနှင့်သင့်တော်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
70502 Royal Honey Essential Emulsion 160ml
"သက်တမ်းရင့် ပျားရည် Royal Aged Honey ပါဝင်သော Emulsion ဖြစ်ပြီး - အသားအရေအတွက် ရေဓါတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ကြိုတင်ဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း - ကြည်လင်တောက်ပသော အသားအရေကို ရရှိစေခြင်း - အစိုဓါတ်ကို ပုံမှန်ထက် (၂) ဆ ထိန်းပေးထားနိုင်ခြင်း - Collagen ထုတ်လွှတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အသားအရေ နူးညံ့စေခြင်း - အသားအရေ နီရဲခြင်းများမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း - ချောမွေ့ကြည်လင်သော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေခြင်း - Glow Skin ရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေပါသည်။
70503 Royal Honey Essential Queen's Cream 62ml
"အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေခြင်း - အသားအရေ ချောမွေ့ကြည်လင်စေခြင်း - အစိုဓါတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ပေးသည့် Deep Moisturizing Cream ဖြစ်ခြင်း - Collagen ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း - သားအရေ နီမြန်းယောင်ရမ်းခြင်းများကို လျော့ပါးစေခြင်း - အသားခြောက်သူများနှင့်သင့်တော်ခြင်းစသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-Serum (သို့) Emulsion အသုံးပြုပြီးချိန်တွင် လိုအပ်သည့် ပမာဏကို လက်အတွင်းသို့ထည့်ကာ စက်ဝိုင်းပုံစံဖြင့် မျက်နှာအနှံ့ လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။"
70505 Royal Honey Essential Eye Cream 30ml
"Royal Honey Essential Eye Cream သည် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် Luxurious Eye Cream ဖြစ်ပြီး - နူးညံ့သော မျက်လုံး Area တစ်ဝိုက်ကို ချောမွေ့စိုပြေစေခြင်း - Anti- Aging Effect ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း - မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်အစိုဓါတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ပေးခြင်း - Honey Bio 60 TM Formula ကြောင့် မျက်ဝန်းတဝိုက်ကို ချောမွေ့နူးညံ့စေခြင်း စသည့် အာနိသင်များရရှိစေပါသည်။
72401 YUJA C DARK SPOT CLEAR ESSENCE (Whitening & soothing & strengthening) 150ml
"၉၃% သော Yuju Extract ပါဝင်ပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းမှ အသားအရေထိ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးကာ စိုပြည်စေပါသည်။ Tranexamic Acid နှင့် Dipotassium glycyrrhizate ကြောင့် ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေသော အသားအရေများကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးကာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေပါသည်။ ဗီတာမင်စီ အစွမ်းကြောင့် ဝက်ခြံ နှင့် ဝက်ခြံ အမာရွတ်များ ၊ အမဲစက်များ သက်သာစေကာ အသားအရေကို တောက်ပကြည်လင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် collagen ထုတ်လွှတ်မှုကို အားဖြည့်ပေးသည့် အတွက် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက
72402 YUJA C DARK SPOT CLEAR CREAM (Whitening & soothing & strengthening) 61ml
"60% Goheung Yuja extract နှင့် essential oil ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသည့်အတွက် အစိုဓာတ် ထိန်းညှိပေးပြီး အသားအရေကို နူးညံ့တောက်ပစေကာ Whitening & soothing & strengthening ၃ မျိုးသော အကျိုးကျေးဇူး ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဗီတာမင်စီ ပါဝင်သည့်အတွက် ဝက်ခြံ အမာရွတ်များ ၊ အမဲစက်များ သက်သာစေရုံမကပဲ နူးညံ့ တောက်ပစေကာ အပြစ်အနာအဆာကင်းသော အသားအရေကို ရရှိစေပါသည်။ နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေယားယံခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-serum or emulsion အသုံးပြုပြီးပါက Cream အနည်းငယ်
72403 YUJA C DARK SPOT CLEAR TONE UP CREAM 40ml
Lemon ထက် vitamin C (3) ဆ ပါဝင်တဲ့ Yuja နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်သောကြောင့် Brightening Effect ပိုမို ပါဝင်သည်။ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး citric acid နှင့် malic acid ပါဝင်သောကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိူ တားဆီးပေးသည်။ အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေသည်။ အရေပြား အတွင်းပိုင်း အလွှာသုံးလွှာ အထိ အရေပြား ပျက်ဆီးမှုကို ပြုပြင်ပေးပြီး ကြည်လင်စေသည်။ SPF 50+ PA ++++ ပါဝင်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အမဲစက်များနှင့် အရေပြားနီမြန်းခြင်းကို လျော့ပါးစေသည်။အသုံးပြုပုံ- - Skin Care အဆင့်၏နောက်ဆုံးအ
3565 BLACK SUGAR SATIN FOUNDATION SPF20 PA+ N21 30ml
"Foundation Type ဖြစ်ပြီး ခရစ်စတယ်မှုန်လေးများကဲ့သို့ဖြစ်နေသည့် အမဲရောင် Black Sugar နှင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး Concelar ပါဝင်သည့် အတွက် အမဲစက်များ၊အမာရွတ်များနှင့် အပစ်အနာအဆာများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်သည့်အစွမ်းရှိသည့်အပြင် အသုံးပြုသည့်အခါ အသားအရေကို ချောမွတ်တောက်ပစေပါသည်။ အရောင်အားဖြင့် #N21သည် သဘာဝသနပ်ခါးရောင်ရှိပြီး SPF 20 ++ ပါဝင်သည့်အတွက် နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Foundation တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-အောက်ခံမိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် အပေါ်မှထပ်ကာလိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ လိမ်းရာတွင်လ
3566 BLACK SUGAR SATIN FOUNDATION SPF20 PA+ N23 30ml
"Foundation Type ဖြစ်ပြီး ခရစ်စတယ်မှုန်လေးများကဲ့သို့ဖြစ်နေသည့် အမဲရောင် Black Sugar နှင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး Concelar ပါဝင်သည့် အတွက် အမဲစက်များ၊အမာရွတ်များနှင့် အပစ်အနာအဆာများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်သည့်အစွမ်းရှိသည့်အပြင် အသုံးပြုသည့်အခါ အသားအရေကို ချောမွတ်တောက်ပစေပါသည်။ အရောင်အားဖြင့် #23သည် ပိုမိုရင့်သော သနပ်ခါးရောင်ဖြစ်ပါသည်။ SPF 20 ++ ပါဝင်သည့်အတွက် နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Foundation တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-အောက်ခံမိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် အပေါ်မှထပ်ကာလိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
3592 BLACK SUGAR SATIN POWDER PACT SPF25 PA++ N21 91g
"ခရစ်စတယ်မှုန်လေးများကဲ့သို့သော အမဲရောင်သကြားမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် Powder Pact ဖြစ်ပြီး အရောင်အားဖြင့် #N21 နှင့် #N23 နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ #N21သည် အသားဖြူသူများနှင့်သင့်တော်ပြီး #N23သည် အရောင်ကာလာ ပိုရင့်သည့်အတွက် အသားညိုသူများနှင့် သင့်တော်ပါသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ပြီးနောက် အပေါ်မှ အသုံးပြုသည့်အခါတွင် နူးညံ့သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူ တောက်ပသော အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ပြီး အပေါ်မှ ထပ်မံပုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။"
3593 BLACK SUGAR SATIN POWDER PACT SPF25 PA++ N23 91g
2733 BUCKWHEAT LOOSE POWDER #21 23g
"Buck Wheat မှ ရရှိသော အဆီအနှစ် များ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားပြီး ပိုးသားလေးလို နူးညံ့သော အမှုန့်လေးများကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့ကြည်လင်စေကာ အဆီပြန်ခြင်းကို အချိန်အကြာကြီးထိန်းပေးနိုင်ပြီး Skin Tone ကို တောက်ပချောမွေ့စေပါသည်။ မိတ်ကပ်သား ကွက်ခြင်း၊ ပြာခြင်း မဖြစ်ပဲ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ကာ မျက်နှာပေါ်ရှိ အပြစ်အနာဆာ နှင့် အရေးကြောင်းများ၊ ချွေးပေါက်များကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ မိတ်ကပ်သားရောင်နှင့် တစ်သားတည်းကျနေခြင်း တို့ကြောင့် သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေပါသည်။ #21 (Skin Beige) - အဝါအနည်
2732 BUCKWHEAT LOOSE POWDER #23 23g
"Buck Wheat မှ ရရှိသော အဆီအနှစ် များ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားပြီး ပိုးသားလေးလို နူးညံ့သော အမှုန့်လေးများကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့ကြည်လင်စေကာ အဆီပြန်ခြင်းကို အချိန်အကြာကြီးထိန်းပေးနိုင်ပြီး Skin Tone ကို တောက်ပချောမွေ့စေပါသည်။ မိတ်ကပ်သား ကွက်ခြင်း၊ ပြာခြင်း မဖြစ်ပဲ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ကာ မျက်နှာပေါ်ရှိ အပြစ်အနာဆာ နှင့် အရေးကြောင်းများ၊ ချွေးပေါက်များကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ မိတ်ကပ်သားရောင်နှင့် တစ်သားတည်းကျနေခြင်း တို့ကြောင့် သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေပါသည်။ #23 (Natural Beige) - အာရ
2731 BUCKWHEAT LOOSE POWDER #40 23g
3793 PEACH COTTON PORE BLUR BB SPF40+PA+++#1 5g
" အဆီပြန်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အသားအရေကို ညီညာချောမွေ့စေပါသည်။ - လိမ်းထားမှန်း မသိသာစေပဲ အသားအရေကို သဘာဝကျကျ တောက်ပစေပါသည်။ - အသားအရေကို စိုပြေစေပြီး ကြည်လင်စေပါသည်။ - SPF 50+++ PA ပါဝင်သည့်အတွက် နေရောင်ကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - BB Cream အား သင့်တော်သော ပမာဏယူပြီး လိမ်းပေးရန် "
3794 PEACH COTTON PORE BLUR BB SPF40+PA+++#2 5g
3791 PEACH COTTON PORE BLUR PACT 4g
"မက်မွန်သီးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသာ အသားအရေကို အေးမြ နူးညံ့စေပါသည်။ - ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းနှင့် အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အသားအရေကို ညီညာချောမွေ့စေပါသည်။ - မိတ်ကပ်သား သိပ်သိပ်လေးဖြင့် ချွေးပေါက်များကို ဖုံးအုပ်ပေးပြီး အသားကိုဖြူဝင်းစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-သင့်တော်သော ပမာဏကိုယူကာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ လက်ချောင်းလေးများဖြင့်သော်လည်းကောင်း (သို့) မိတ်ကပ်ရေမြှုပ်နှင့်သော်လည်းကောင်း လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
2712 PEACH COTTON MULTI FINISH POWDER(15g)
"မက်မွန်သီးဖြင့် အဓိက ထုတ်လုပ်ထားပြီး Peach & Sake Extract ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေပြီး - Finishing Powder သိပ်သိပ်လေးနှင့် မိတ်ကပ်လိမ်းထားသည့် Look အတိုင်း ရစေခြင်း - Micro – Silica Powder ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အဆီနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း - ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်လှပသော Flawless Skin ရရှိစေခြင်း - အရေပြားယားယံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း - Sensitive သမားများအတွက် အထူးသင့်တော်ခြင်း - Peach အနံ့သင်းသင်းလေးဖြင့် တစ်နေကုန်လန်းဆန်းနေစေခြင်း စသည့် အာနိသင်များစွာရှိပါသည်။ အ
2735 RICE SHIMMER POWDER 23g
ဆန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ပုလဲမှုန်လေးများပါဝင်သည့် ပေါင်ဒါဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့်အခါ ပါးပြင်ပေါ်တွင် ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ တောက်ပနေပြီး Highlight Effect ကိုလည်း ရရှိစေကာ သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေသည့် Finishing Powder ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- Make Up Step နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ပါးပြင်ပေါ်သို့ ဗူးတွင်ပါသော Puff ဖြင့် အသုံးပြုနိင်ပါသည်။
3406 WHITE GRAPE FRESH UP FOUDNATION #23 SAND BEIGE 30ml
"စပျစ်သီးမှရရှိသော သဘာဝအာနိသင်များနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Foundation ဖြစ်ပါသည်။ ရေဓါတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ပေးနိုင်သည့်အပြင် cream formula နှင့်ထုတ်လုပ် ထားသည့်အတွက် အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အသားနှင့်တသားတည်းဖြစ်စေပြီး ပေါ့ပါးနူးညံ့သော ခံစားမှုကို ရရှိစေပါသည်။ မည်သည့်အသားအရေအတွကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး နံပါတ် #23သည် ဝါညိုနုရောင် (သဲကဲ့သို့)အရောင်ဘက်သမ်း သည့် ကာလာဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-သင့်တော်သော ပမာဏကိုယူကာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ လက်ချောင်းလေးများဖြင့်သော်လည်းကောင်း (သို့) မိတ်ကပ်ရေမြှုပ်နှင့်သော်လည်းကောင်း လ
3405 WHITE GRAPE FRESH UP FOUNDATION #21 NATURAL BEIGE 80g
"စပျစ်သီးမှရရှိသော သဘာဝအာနိသင်များနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Foundation ဖြစ်ပါသည်။ ရေဓါတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ပေးနိုင်သည့်အပြင် cream formula နှင့်ထုတ်လုပ် ထားသည့်အတွက် အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အသားနှင့်တသားတည်းဖြစ်စေပြီး ပေါ့ပါးနူးညံ့သော ခံစားမှုကို ရရှိစေပါသည်။ မည်သည့်အသားအရေအတွကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး နံပါတ် #21 သည် သဘာဝသနပ်ခါးရောင်သည့် ကာလာဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-သင့်တော်သော ပမာဏကိုယူကာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ လက်ချောင်းလေးများဖြင့်သော်လည်းကောင်း (သို့) မိတ်ကပ်ရေမြှုပ်နှင့်သော်လည်းကောင်း လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။"
3402 WHITE GRAPE FRESH UP LIGHT PACT #21 80g
"စပျစ်သီးစိမ်းမှ ထုတ်လုပ်ရရှိသော အာနိသင်များနှင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ထူပိတ်ပိတ်မဖြစ်စေပဲ မျက်နှာအသားအရေကို သဘာဝအတိုင်းကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည်။ မည်သည့်အသားအရေမဆို သင့်တော်ပြီးနံပါတ် #21သည် အရောင်အားဖြင့် အဝါနုရောင် (သနပ်ခါးရောင်) အသားဖြူသူများနှင့်ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ မိတ်ကပ် Puff ကို အသုံးပြုကာ ညင်သာစွာပုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။"
3403 WHITE GRAPE FRESH UP LIGHT PACT #23 80g
"စပျစ်သီးစိမ်းမှ ထုတ်လုပ်ရရှိသော အာနိသင်များနှင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ထူပိတ်ပိတ်မဖြစ်စေပဲ မျက်နှာအသားအရေကို သဘာဝအတိုင်းကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည်။ မည်သည့်အသားအရေမဆို သင့်တော်ပြီး နံပါတ် #23သည် ဝါညိုနုရောင် (သဲကဲ့သို့)အရောင်ဘက်သမ်းသည့် ကာလာဖြစ်ပြီး အသားညိုသူများနှင့် သင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ မိတ်ကပ် Puff ကို အသုံးပြုကာ ညင်သာစွာပုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။"
3408 WHITE GRAPE FRESH UP BASE #01 PEACH 30ml
"White Grape ၏ အာနိသင်ကြောင့် အသားအရေကို စိုပြေဝင်းပစေပြီး ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်။ ရေဓါတ်အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့်အတွက် အသားခြောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Makeup Base ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အသားအရေကို တောက်ပြောင်စေပါသည်။ #01 Peach သည် ပန်းနုရောင်သန်းသည့် ကာလာမျိုးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အသားအရေအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-Basic Skin Care များဖြစ်သည့် Toner, Moisture , Serum များအသုံးပြုပြီးနောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိမိအသုံး ပြုမည့်ပမာဏကို ယူကာ လက်ချောင်းလ
3409 WHITE GRAPE FRESH UP BASE #02 GREEN 30ml
"White Grape ၏ အာနိသင်ကြောင့် အသားအရေကို စိုပြေဝင်းပစေပြီး ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်။ ရေဓါတ်အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့်အတွက် အသားခြောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Makeup Base ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အသားအရေကို တောက်ပြောင်စေပါသည်။ #02 Green သည် Cream ကာလာတွင် စိမ်းဖန့်ဖန့်အရောင်သန်းသည့် အရောင်မျိုးရှိပြီး အရေပြားပေါ်ရှိ နီရဲသော နေရာများကို ဖုံးပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-Basic Skin Care များဖြစ်သည့် Toner, Moisture , Serum များအသုံးပြုပြီးနောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသ
3410 WHITE GRAPE FRESH UP BASE #03 PURPLE 30ml
"White Grape ၏ အာနိသင်ကြောင့် အသားအရေကို စိုပြေဝင်းပစေပြီး ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်။ ရေဓါတ်အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့်အတွက် အသားခြောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Makeup Base ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အသားအရေကို တောက်ပြောင်စေပါသည်။ #03 Purple သည် ခရမ်းနုရောင်ဘက်သမ်းသည့်အရောင်မျိုးရှိပြီး အရေပြားပေါ်ရှိ ဝါကျင်ကျင်နှင့် အသားရောင် မညီညာခြင်းများကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-Basic Skin Care များဖြစ်သည့် Toner, Moisture , Serum များအသုံးပြုပြီးနောက် အသုံးပြ
71051 PEACH COTTON BLUR CUSHION SPF50+PA+++ #1 (Pink Base) 15g
"Vitamin A, C နှင့် E ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အသားအရေ အတွင်းပိုင်းအထိ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ လိမ်းထားမှန်း မသိအောင် ပေါ့ပါးလွန်းပြီး စေးကပ်မှူမရှိတာကြောင့် နွေရာသီမှာပါ လိမ်းရသင့်တော်ပါသည်။ နူးညံ့ပြီး အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သည်။ အခြားသော puff များနှင့် မတူဘဲ puff လေးမှာ ထိပ်ချွန်လေးပါဝင်သောကြောင့် မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်နှင့် နှာခေါင်းနားတစ်ဝိုက်ကို လွယ်ကူစွာ လိမ်းနိုင်သည်။ အသားဖြူသူများအတ
71052 PEACH COTTON BLUR CUSHION SPF50+PA+++ #2 (Yellow Base) 15g
"Vitamin A, C နှင့် E ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အသားအရေ အတွင်းပိုင်းအထိ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ လိမ်းထားမှန်း မသိအောင် ပေါ့ပါးလွန်းပြီး စေးကပ်မှူမရှိတာကြောင့် နွေရာသီမှာပါ လိမ်းရသင့်တော်ပါသည်။ နူးညံ့ပြီး အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သည်။ အခြားသော puff များနှင့် မတူဘဲ puff လေးမှာ ထိပ်ချွန်လေးပါဝင်သောကြောင့် မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်နှင့် နှာခေါင်းနားတစ်ဝိုက်ကို လွယ်ကူစွာ လိမ်းနိုင်သည်။ အသားညိုသူများ
2581 Vita Fit Cover Lasting Cushion SPF50+PA+++#1 (Light Skin) 15g
Niacinamide တွင် အသားအရေအတွက် အရေးကြီးသော Vitamin B3 ပါဝင်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေဖျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး လိုအပ်သော ပရိုတင်းဓါတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဝက်ခြံကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေပြီး အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ Adenosine ကြောင့် ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြင့်စေပြီးအသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်း၊ယားယံခြင်း၊များကိုသက်သာစေပါသည်။ထို့အပြင် လိမ်းလိုက်လျှင် လိမ်းထားမှန်းမသိသာအောင် အလွန်ပေါ့ပါးပြီး အသားထဲ စိမ့်ဝင်လွယ်ကာ အမဲစက်များ၊ချွေးပေါက်များကိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
2583 Vita Fit Cover Lasting Cushion SPF50+PA+++#3 (Beige Skin) 15g
72763 Royal Honey Propolis Essence Cushion Spf45 pa++ 03 Sand Bege 15g
72762 Royal Honey Propolis Essence Cushion Spf 45 par++ 02 Natural Beige
( 02 Natural Beige--Bright yellow base ) 33% Royal Honey Propolis Extract ပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားကို အစိုဓါတ် အပြည့်အဝထိန်းပေးနိုင် ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ကြမ်းရှသော အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေပြီး ROYAL HONEY PROPOLIS ESSENCE CUSHION သည်လိမ်းထားမှန်းမသိအောင် ပေါ့ပါးပြီး အသားအရေကိူ ကြည်လင်တောက်ပချောမွေ့စေကာ Glow Effect ကိူ ရရှိစေနိူင်ပါသည်။ ပျားရည်ကဲ့သို့ နူးညံ့သော အထိတွေ့ကို ခံစားရရှိနိုင်ပြီး နာရီပေါင်း ၃၀ အထိ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးကာ အရေပြားကို စိုပြည်တောက်ပစေပါသည်။ SPF45 PA++ ပါဝင်သောကြောင့် နေလောင်ဒ
72764 ROYAL HONEY PROPOLIS ESSENCE PRIMER 30g
Royal Honey Propolis Extract သည် အရေပြားကို အစိုဓါတ် အပြည့်အဝထိန်းပေးနိုင် ခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ကြမ်းရှသော အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေခြင်း စသည့်အာနိသင်များစွာပါရှိပါသည်။ ROYAL HONEY PROPOLIS ESSENCE PRIMER သည် မိတ်ကပ်သား ကြာရှည်စွာ မြဲဖို့ ကူညီပေးကာ အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်။ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းပေးကာ စေးကပ်မှုမရှိစေဘဲ အစိုဓာတ်ကို များစွာဖြည့်တင်းပေးသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ဖြစ်တတ်သော အရေပြား ခြောက်သွေ့ ရျ် မိတ်ကပ်သားကွက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံ
2786 White Dandelion Derma Mild Sun Cushion SPF50 14g
White dandelion flower, allantoin နဲ့ eco-ceramide တို့ကြောင့် sensitive အရမ်းဖြစ်တတ်သော အသားအရေတွက် အဆင်ပြေသည်။ physical sun cream type ဖြစ်ပြီး နေလောင်ဒဏ်ကို လုံးဝ အပြည့်ဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဆရာဝန်စမ်းသပ်ချက်ရရှိထားပြီး ကလေးငယ် အသားအရေပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုပုံ ဘူးထဲပါသော puff လေးဖြင့် ကူရှင်လေးထဲသို့ ဖိပေးပါ၊ မျက်နာပေါ်တွင် ညင်သာစွာပုတ်ပုတ်ပြီး လိမ်းပါ၊ လိုအပ်သလို ၂-၆ hours ခြား လိမ်းပေးနိင်သည်။
1046 Salomon Dark Circle Concealer #1 10g
"Salmon Dark Circle Concealer တွင် Salmon Caviar Extract, Salmon roe နှင့် Salmon Oil တို့ပါဝင်သောကြောင့် Omega3, Fatty Acids များကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး - မျက်ကွင်းညိုခြင်းများကို ထိရောက်စွာဖုံးအုပ်ပေးနိင်ခြင်း - အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း - အရေပြားပေါ်ရှိ အမဲကွက်များကို မှေးမှိန်စေကာ အရေပြားကို နူးညံ့စေပြီး တောက်ပစေခြင်း - #1 ( Fair to Light Skin Tones ) အသုံးပြုပုံ-Foundation အသုံးပြုပြီးနောက် လိုအပ်သော ပမာဏကိုယူကာ အမဲကွက်များပေါ်သို့ လက်ဖြင့် တို့သုတ်ပြီး Blend လုပ်ပေးပါ။
1047 Salomon Dark Circle Concealer #2 10g
"Salmon Dark Circle Concealer တွင် Salmon Caviar Extract, Salmon roe နှင့် Salmon Oil တို့ပါဝင်သောကြောင့် Omega3, Fatty Acids များကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး - မျက်ကွင်းညိုခြင်းများကို ထိရောက်စွာဖုံးအုပ်ပေးနိင်ခြင်း - အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း - အရေပြားပေါ်ရှိ အမဲကွက်များကို မှေးမှိန်စေကာ အရေပြားကို နူးညံ့စေပြီး တောက်ပစေခြင်း - #2 ( Fair to Medium Skin Tones ) အသုံးပြုပုံ-Foundation အသုံးပြုပြီးနောက် လိုအပ်သော ပမာဏကိုယူကာ အမဲကွက်များပေါ်သို့ လက်ဖြင့် တို့သုတ်ပြီး Blend လုပ်ပေးပ
3581 BLACK SUGAR SATIN FULL COVER CONCEALER #1 5g
3602 CHOCO DIPPING MASCARA #2 14mg
ကိုကိုးမှုန့်လေးများ အရည်ပျော်နေသည့်ပုံစံကဲ့သို့ အညိုရောင်ကာလဖြစ်ပြီး Mascara Curves နှင့်ထူထဲသည့် Brush တံသည် မျက်တောင်များကို ပိုမိုရှည်လျားစေနိုင်ကာ ဘေးဘက်သို့ပျံ့နှံ့ခြင်းများလုံးဝမရှိသည့် တနေကုန်ခံသော Mascara ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မျက်တောင်ကော့သည့် ကိရိယာဖြင့် မျက်တောင်များကို ဦးစွာကော့ပေးပြီးနောက် ၎င်း Mascara ကို ဇစ်ဇက်ပုံစံအသုံးပြုကာ မျက်တောင်များကို ကော့ပေးနိုင်ပါသည်။ Mascara များကို ပြန်လည်ဖယ်ရှားလိုလျှင် အနည်းငယ်နွေးသော ရေဖြင့် အလွယ်တကူ ပြန်လည် ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသည်။
2035 ROOTCURL MASCARA #BLACK 8g
အနက်ရောင်ဆန် ၊ အနက်ရောင် နှမ်းစေ့ ၊ သံလွင်ဆီ နှင့် Argan Oil တို့ ပေါင်းစပ် ပါဝင်သောကြောင့် မျက်တောင်ကို ကျန်းမာရှင်သန်စေပြီး မျက်တောင်များ ပျက်စီးခြင်း ဒဏ်မှလဲ ကာကွယ်ပေးပါသည့်အပြင် မျက်တောင်ကို တနေကုန် ရှည်လျား ကော့ညွှတ်စေပါသည်။ အရည်ပုံစံ မဟုတ်သည့်အတွက် အသုံးပြုစဉ်အတွင်း ပေကျံတာမျိုး မဖြစ်သည့် mascara ဖြစ်ပါသည်။
2035-1 ROOTCURL MASCARA VOLUME #Black 8g
"ပုံမှန်ထက် ၃ဆ ပိုရှည်ပြီး မျက်တောင် တစ်ပင်ချင်းစီကို သဘာဝအတိုင်းကော့ညွှတ်စေကာ ရေနှင့် ချွေးများကြောင့် ပျက်သွားခြင်းမရှိပဲ တနေကုန် မျက်တောင်လေးတွေကို အစွမ်းကုန် ထူထူလေးနဲ့ ကော့ညွတ်စေပါသည်။ Black rice extract, black sesame seed extract,olive oil ,argon oil တို့ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်သားစပ်ခြင်း မျက်တောင်ကျိုးပဲ့ခြင်း ကျွတ်ခြင်း လုံးဝ မရှိပဲ မျက်တောင်များကျန်းမာဖို့ အထောက်အကူပေးပါသည်"
265-1 CHOCO EYEBROW POWDER CAKE No. 1 (Grey & Khaki Black Colour) 59ml
ကိုကိုးမှုန်လေးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး မျက်ခုံးကို သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေသည့် #1 (အမဲရောင်ဘက်သန်းသည့်အညို) နှင့် #2 ( အညိုရောင်အနု) Choco Eyebrow Powder Cake
ကိုကိုးမႈန္ေလးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး မ်က္ခံုးကို သဘာ၀အတိုင္းလွပေနေစသည့္ #1 (အမဲေရာင္ဘက္သန္းသည့္အညိဳ) နွင့္ #2 ( အညိဳေရာင္အႏု) Choco Eyebrow Powder Cake
265-2 CHOCO EYEBROW POWDER CAKE No.2 ( Grey & Brown Colour) 59ml
3233 CHOCO POWDER BROW AUTO PENCIL #3
နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အညိုရောင်ကာလာရှိသည့် မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသွားတဖက်သည် အနည်းငယ်ချွန်သည့် ပုံစံရှိကာ အသုံးပြုလိုက်လျှင် တစ်နေကုန်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော အခြားတဖက် Brush ဖြင့်လိုအပ်သလို ပုံသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မျက်ခုံးတလျောက်တွင် မိမိလိုအပ်သလို ပုံဖော်ကာ ဆွဲပေးနိုင်ပါသည်။
3631 CHOCO SYRUP PEN LINER #1 0.5g
" ငှက်မွှေးကဲ့သို့ နူးညံ့ပြီး Pen Type ဖြစ်၍ ဆွဲကူရလွယ်ကူပါသည်။ - မျက်တောင်ကျွတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး လိုအပ်သော အာဟာရဖြည့်ပေးပါသည်Water Proof မဟုတ်သော်လည်း တနေကုန်ခံပါသည် "
2741 MINERAL LIQUID EYELINER #1 7000W
Water Type Eye Liner ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသည့်အခါ မျက်ဝန်းအား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လွင်စေကာ Moisturizer ပါဝင်ပြီး Sensitive ဖြစ်လွယ်သောသူများအတွက် အဆင်ပြေသည့် Water Lasting Formula နှင့် Matte Deep Color Eye Liner ဖြစ်ပါသည်။ #1 သည် အမဲရောင်ကာလာဖြစ်ပါသည်။ Eye liner ကို ယခုမှစတင်သုံးစွဲမည့်သူများအနေနှင့်လည်း တကြိမ်တည်းနှင့် အလွယ်တကူသုံးစွဲနိုင်သော Eye liner Brush မျိုးဖြစ်ပြီး လိုအပ်သလို ဆွဲပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မိမိအသုံးပြုမည့် ပမာဏကိုယူကာ မျက်ခွံပေါ်တွင် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ဆိုးနိုင်ပြီး စက္ကန့
1769-12 MINERAL SUGAR BLEND EYES #2
"Pigment ထွက်အားကောင်းပြီး အမှုန်ကျနည်းခြင်း Matte နဲ့ Shimmer ရောစပ်ပြီး လှပသော အရောင် ၆မျိုးပါဝင်ပါသည်။ Micro Powder နှင့် Slip Sliding Powder တို့ကြောင့် လိမ်းလိုက်ရင် ပေါ့ပါး ချောမွေ့ ပြီး သဘာဝကျတဲ့ အရောင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ basic transition shade များပါဝင်တာမို့ မျက်ရစ် ကြီးကြီးဖော်ဖို့လဲ အကောင်းဆုံး Palette ပါ"
1769-14 MINERAL SUGAR BLEND EYES #4
72731 - CHOCO EYEBROW SLIM PENCIL 01 # DARK BROWN
72732 - CHOCO EYEBROW SLIM PENCIL 02 # BROWN
72733 - CHOCO EYEBROW SLIM PENCIL 03 # NATURAL BROWN
72734 - CHOCO EYEBROW SLIM PENCIL 04 # LIGHT BROWN
1055-3 FRESH FRUIT LIP & CHEEK No.1 (Orange) Three in one formula, Cheek Blush + Eyeshadow + Lip Tint, Fresh Fruit 2.5g
"အသီးအနှံများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး2in 1 Formula ဖြင့် ပါးနီနှင့် နှုတ်ခမ်းနီအဖြစ် တူတူသုံးနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ Box တစ်ခုတွင် အရောင်မတူညီသော အကန့် ၃ကန့်ပါဝင်ပြီး #1 ကို လိမ္မော်သီး၊ #3 ကို ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး ၊ #4 ကို သဖန်းသီးနှင့် #5 ကို အသီးစုံရောစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် သဘာဝပစ္စည်းများ၏ အာနိသင်ကြောင့် တာရှည်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်း လှပနေစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ -လက်ချောင်းလေးများကို အသုံးပြုကာ ပါးပြင်ပေါ်သို့ Blend လုပ်ပေးနိုင်ပြီး စုတ်တံဖြင့်ဖြစ်စေ( သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ခမ်းသ
1055-5 FRESH FRUIT LIP & CHEEK No.3 (Cherry Tomato) Three in one formula, Cheek Blush + Eyeshadow + Lip Tint, Fresh Fruit 2.5g
1055-6 FRESH FRUIT LIP & CHEEK No.4 (Figs) Three in one formula, Cheek Blush + Eyeshadow + Lip Tint, Fresh Fruit 2.5g
1055-7 FRESH FRUIT LIP & CHEEK No.5 (Fruits Mix) Three in one formula, Cheek Blush + Eyeshadow + Lip Tint, Fresh Fruit 2.5g
1055-8 FRESH FRUIT LIP & CHEEK No.6 (Plum) Three in one formula, Cheek Blush + Eyeshadow + Lip Tint, Fresh Fruit 2.5g
"2 in 1 Formula ကို အသုံးပြုထားပြီး ပါးနီနှင့် နှုတ်ခမ်းနီကို တူတူအသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းသားများကို နူးညံ့စိုပြေစေပြီး ပါးနီအဖြစ်အသုံးပြုရာတွင်လည်း သဘာဝအတိုင်းလှပစေကာ တနေကုန်ခံပါသည်။ ဗူးတစ်ဗူးတွင်မတူညီသည့် အရောင်ကာလာ (၃)မျိုးပါဝင်ပြီး #6 ( Plum) သည် ဇီးသီးရနံ့မွှေးပျံ့နေစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - လက်ချောင်းလေးများကို အသုံးပြုကာ ပါးပြင်ပေါ်သို့ Blend လုပ်ပေးနိုင်ပြီး စုတ်တံဖြင့်ဖြစ်စေ( သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ခမ်းသားကို ဆိုးပေးနိုင်ပါသည်။"
72701 buttery cheek cake 01 Berry and Cream (Soft Lavender Color) 9.5g
အရောင် (၆) မျိုး ရှိသည်။ Palm tree seed butter နှင့် Shea Butter ပါဝင်သောကြောင့် အစိုဓာတ်ဖြည့်ရရှိစေကာ ခြောက်သွေ့သော အသားအရေအတွက် အာဟာရ ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Baking method ကို အသုံးပြုရျ် လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Beginner များ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထောပတ် ကဲ့သို နူးညံ့သော ခံစားမှုကို ရနိုင်သည်။
72702 buttery cheek cake 02 Vintage Cherry (Dusty Cherry color) 9.5g
72703 buttery cheek cake 03 Vanilla Rose (Rose Color) 9.5g
72704 buttery cheek cake 04 Toasted Peach (Peach Color) 9.5g
72705 buttery cheek cake 05 Maple Ginger (Mandarin ginger color) 9.5g
72706 buttery cheek cake 06 Apricot Chou (Light apricot color) 9.5g
1055-23 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #3
1055-21 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #1
1055-22 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #2
မည်သည့်အသားအရေမျိုးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ပြီး ရေဓါတ်ပါဝင်ခြင်း ၊တာရှည်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပစေခြင်း ၊ နူးညံ့သော ထိတွေ့မှုရှိခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်ရှိသောပါးနီတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ #01 (မံုလာဥ) carrot ရနံ အသုံးပြုပုံ - ပါးပြင်ပေါ်တွင် အစက်နှစ်စက်သုံးစက်ခန့်တို့ပေးပြီး ပါးရိုးတလျောက် Blush (သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ညှိပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ #Water Type Blusher , #02 Active Carrot
1055-24 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #4
မည်သည့်အသားအရေမျိုးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ပြီး ရေဓါတ်ပါဝင်ခြင်း ၊တာရှည်ခံပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပစေခြင်း ၊ နူးညံ့သော ထိတွေ့မှုရှိခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်ရှိသောပါးနီတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ #01 Berry ရနံ အသုံးပြုပုံ - ပါးပြင်ပေါ်တွင် အစက်နှစ်စက်သုံးစက်ခန့်တို့ပေးပြီး ပါးရိုးတလျောက် Blush (သို့) လက်ချောင်းလေးများဖြင့် လိုအပ်သလို ပုံဖော်ညှိပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ #Water Type Blusher , #04 Berry Beet Juice
1055-26 Fresh Fruit Juice Extraction Blush 7g #6
2565 AVOCADO STICK LIP BALM #1 3.4g
"အစိုဓာတ်ကြွယ်ဝသော Acocado Oil ကြောင့်နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး ကျန်းမာစေပါသည်။ နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှလဲ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် နှုတ်ခမ်းနီ မဆိုးခင် အောက်ခံ base ပုံစံမျိုးခံပါက နှုတ်ခမ်းသား ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ချောမွတ်စေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-နှုတ်ခမ်းသားများပေါ်တွင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးသည့်အတိုင်း လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
788-11 TOMATO JELLY TINT LIP #2 Tint Lip, free Radical 4.5g
အမျှင်ဓါတ်များပါဝင်သည့်ခရမ်းချဉ်သီးမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရောင် နှစ်မျိုးရှိပြီး နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့သူများနှင့် Matte Type နှုတ်ခမ်းနီကို မကြိုက်သူများနှင့် Lip Balm အသုံးပြုရခြင်းကို မနှစ်သက်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ #2 သည် ပန်းနုရောင်ဖျော့ဖျော့ ဖြစ်ပြီး #4 မှာ ပန်းနုရောင်အရင့် ဖြစ်ပါသည်။
788-12 TOMATO JELLY TINT LIP #3 Tint Lip, free Radical 4.5g
"ခရမ်းချဉ်သီးတွင် အမျှင်ဓါတ်များ၊ Vitamin A နှင့် C ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားများကို စိုပြေနူးညံ့စေပြီး Cool & Refreshing ဖြစ်စေသည့် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့သူများ၊ Matte Type နှုတ်ခမ်းနီဆိုးရတာကို မနှစ်သက်သူများနှင့် Lip Balm အသုံးပြုခြင်းကို မနှစ်သက်သူများ သုံးနိုင်ပါသည်။ Tomato Jelly Tint Lip #3 သည် Tomato Extract နှင့် Rosewater တို့ပေါင်းစပ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းသားများကို နူးညံ့စေကာ တနေကုန်ခံသည့် နှုတ်ခမ်းနီ ဖြစ်ပါသည်။ #3 သည် (Orange Tomato Color ) ဖြစ်ပြီး ခပ်ဖျော့ဖျော့လိမ္
788-13 TOMATO JELLY TINT LIP #4 Tint Lip, free Radical 4.5g
3411 SUGAR COLOR TINT IN BALM #1 3.2g
3413 SUGAR COLOR TINT IN BALM #3 3.2g
3414 SUGAR COLOR TINT IN BALM #4 3.2g
1991 - ARGAN OIL SILK PLUS HAIR SHAMPOO
1992 - ARGAN OIL SILK PLUS HAIR CONDITIONER
1994 - ARGAN OIL SILK PLUS HAIR ESSENCE 100ml
"Argan Oil တွင်ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ်များ၊ ပရိုတင်းနှင့် ဗီတာမင်များကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး Almond , Sunflower နှင့် Olive Oil တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် - အစိုဓါတ်ကို ထိန်းထားပေးနိုင်ခြင်း - ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း - ဆံကေသာနူးညံ့ပျော့ပြောင်းတောက်ပြောင်စေခြင်း စသည့် အာနိသင်ရှိသော Hair Essence ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-Towel ထဲသို့ ပမာဏအနည်းငယ်ကို ထည့်ကာ ခြောက်သွေ့နေသော ဆံသားများကို ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးလျှင် Dryer ဖြင့် အခြောက်ခံပေးပါ။ Heat Treatment ပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင်လည
406-267 (AMENITY)ARGAN OIL SILK PLUS HAIR SHAMPOO 30ML
Argan Oil နှင့် Vitamin E ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သောကြောင့် ဦးရေပြားကို ဗောက်ပျောက်စေသည့်အပြင် ဆံပင်သန်မာစေသည်။ ထို့ပြင် ဆံသားကို သန့်ရှင်းစေပါသည်။
Argan Oil ႏွင့္ Vitamin E ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဦးေရျပားကို ေဗာက္ေပ်ာက္ေစသည့္အျပင္ ဆံပင္သန္မာေစသည္။ ထို႕ျပင္ ဆံသားကို သန္႔ရွင္းေစပါသည္။
406-268 (AMENITY)ARGAN OIL SILK PLUS HAIR CONDITIONER 30ML
Argan Oil နှင့် Vitamin E ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး ပျက်စီးနေသော ဆံသားများကို ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ရှုပ်ထွေးနေသော ဆံသားများကို ပိုးသားသဖွယ် တောက်ပြောင် ချောမွေ့စေပါသည်။
Argan Oil ႏွင့္ Vitamin E ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ျပီး ပ်က္စီးေနေသာ ဆံသားမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရႈပ္ေထြးေနေသာ ဆံသားမ်ားကို ပိုးသားသဖြယ္ ေတာက္ေျပာင္ ေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။
2084 SHEA BUTTER PERFUMED HAND CREAM (Jasmine Scent) 30ml
"Shea Butter မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များနှင့် စံပယ်ရနံ့တို့ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေသည့်အပြင် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ -အသုံးပြုလိုသောပမာဏကို ယူကာ လက်ဖဝါးများ၊ လက်ဖမိုးများကို နေ့စဉ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
2085 SHEA BUTTER PERFUMED HAND CREAM (Musk Scent) 30ml
"Shea Butter မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များနှင့် ကတိုးဆီတို့ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေသည့်အပြင် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ -အသုံးပြုလိုသောပမာဏကို ယူကာ လက်ဖဝါးများ၊ လက်ဖမိုးများကို နေ့စဉ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
2088 SHEA BUTTER PERFUMED HAND CREAM (Peach Scent) 30ml
"Shea Butter မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များနှင့် မက်မွန်သီးရနံ့တို့ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေသည့်အပြင် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ -အသုံးပြုလိုသောပမာဏကို ယူကာ လက်ဖဝါးများ၊ လက်ဖမိုးများကို နေ့စဉ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
2089 SHEA BUTTER PERFUMED HAND CREAM (Rose Scent) 30ml
"Shea Butter မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များနှင့် နှင်းဆီပန်းရနံ့တို့ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေသည့်အပြင် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ -အသုံးပြုလိုသောပမာဏကို ယူကာ လက်ဖဝါးများ၊ လက်ဖမိုးများကို နေ့စဉ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ "
2081 SHEA BUTTER PERFUMED HAND CREAM (HONEY SCENT)30ml
Shea Butter မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များနှင့် ပျားရည်စစ်စစ်တို့ ပေါင်းစပ်ကာထုတ်လုပ်ထားပြီး - လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေပြီး အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ - အရေပြားကွဲအက်ခြင်း၊ အရေခွံလန်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း နှင့် - လက်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ (အသုံးပြုပုံ) - အသုံးပြုလိုသောပမာဏကို ယူကာ လက်ဖဝါးများ၊ လက်ဖမိုးများကို နေ့စဉ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
2087 SHEA BUTTER PERFUMED HAND CREAM (GRAPE FRUIT SCENT) 30ml
Shea Butter မှရရှိသော အာဟာရဓါတ်များနှင့် GRAPE FRUIT တို့အပြင် aloe vera တို့ ပေါင်းစပ်ကာထုတ်လုပ်ထားပြီး - လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေပြီး အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ - အရေပြားကွဲအက်ခြင်း၊ အရေခွံလန်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း နှင့် - လက်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ (အသုံးပြုပုံ) - အသုံးပြုလိုသောပမာဏကို ယူကာ လက်ဖဝါးများ၊ လက်ဖမိုးများကို နေ့စဉ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
1821 - ALOE VERA 93% SOOTHING GEL 300ml
"Aloe Vera Leaf Extract 93% ပါဝင်ပြီး Aloe Vera သည် Anti- Bacterial Properties ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး အသားအရေကို အေးမြချောမွတ်စေသည့် အာနိသင်ရှိသော ရာသီမရွေး သုံးနိုင်သည့် Soothing Gel ဖြစ်ပါသည်။အသားအရေ ခြောက်သွေ့ကာ ရေဓါတ် လိုအပ်နေသူများ၊ အစိုဓါတ်လုံလောက်စွာ မရရှိသည့်အသားအရေအတွက် အေးမြသော ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ မျက်နှာနှင့် Body ပါ အသုံးပြုနိုင်သည့် Jambo Size ဗူးကြီး အနေနှင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသားအရေ နီမြန်းခြင်း၊ အသားအရေအေးမြမှုမရှိပဲ အရေပြားပူခြင်းနှင့် နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြ
1975 GRAPE SEED OIL BODY WASH 335ml
"Grape Seed Oil Body Wash တွင်Vitamin E နှင့် Unsaturated Fatty Acid တို့မြောက်များစွာပါဝင်ပြီး စပျစ်သီးအစေ့မှထွက်ရှိသော အဆီ၊ ဝိုင်တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် နူးညံ့သောထိတွေမှုကိုခံစားရပြီး ရေဓါတ်ကိုဖြည့်ပေးခြင်းကြောင့် အသားအရေကိုစိုဝင်းစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-လိုအပ်သည့်ပမာဏကိုယူပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပြီးလျှင် ရေဖြင့်ဆေးချပေးပါ။"
1976 GRAPE SEED OIL BODY LOTION 335ml
"Grape Seed Oil Body Lotion တွင်Vitamin E နှင့် Unsaturated Fatty Acid တို့မြောက်များစွာပါဝင်ပြီး စပျစ်သီးအစေ့မှထွက်ရှိသော အဆီ၊ ဝိုင်တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို စိုပြေတင်းရင်းစေသည့်အပြင် ရေဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသောကြောင့် အသားခြောက်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ရေချိုးပြီးချိန်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ "
1977 - GRAPE SEED OIL BODY COATING OIL
2553 INTENSIVE SHEA BUTTER CREAM LOTION 335ml
"Shea Butter နှင့် Oat Meal တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေကို စိုပြေနူးညံ့စေနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ရေချိုးပြီးချိန်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။"
2551 INTENSIVE SHEA BUTTER CREAM WASH 335ml
"Shea Butter နှင့် Oat Meal တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ခြောက်သွေ့သော အသားအရေနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အသားအရေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-လိုအပ်သည့်ပမာဏကိုယူပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပြီးလျှင် ရေဖြင့်ဆေးချပေးပါ။ "
1825 LEMON VERBENA BODY LOTION 335ml
" ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများနှင့် ဆောင်တော်ကူးပန်းကို Lemon နှင့် လိမ္မော်အနွယ်ဝင် Citrus သီးတို့ ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ကို ရရှိနိုင်သည့် Moisturizer ပါဝင်ပြီး Cool Hydration ဖြစ်သည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေကို အေးမြစိုပြေစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ရေချိုးပြီးချိန်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။"
1824 LEMON VERBENA BODY WASH 335ml
"ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများနှင့် ဆောင်တော်ကူးပန်းကို Lemon နှင့် လိမ္မော်အနွယ်ဝင် Citrus သီးတို့ ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် အသားအရေကို စင်ကြယ်စေပြီး အညစ်အကြေးများကင်းစင်စေကာ အသားအရေခြောက်သွေ့သူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-လိုအပ်သည့်ပမာဏကိုယူပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပြီးလျှင် ရေဖြင့်ဆေးချပေးပါ။ "
71801 HONEY RICH BODY WASH 335ml
"ပျားရည်တွင် အသားအရည်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး အစိုဓါတ်ကို ရရှိစေသော အာနိသင်များစွာရှိခြင်း၊ - အာဟာရများစွာပါဝင်သော ပျားရည်ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းကင်းစေပြီး အသားအရေကို စိုပြေစေသည်။ - ပျားရည် ၏ ပိုးသတ်ဆေးပါဝင်သော ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် အသားရည် ယားယံခြင်း၊ယောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့သော အသားအရေကို ပိုမိုစိုပြေလာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-လိုအပ်သည့်ပမာဏကိုယူပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပြီးလျှင် ရေဖြင့်ဆေးချပေးပါ။ "
71802 HONEY RICH BODY ESSENCE 335ml
"ပျားရည်တွင် အသားအရည်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး အစိုဓါတ်ကို ရရှိစေသော အာနိသင်များစွာရှိခြင်း၊ - အာဟာရများစွာပါဝင်သော ပျားရည်ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းကင်းစေပြီး အသားအရေကို စိုပြေစေသည်။ - ပျားရည် ၏ ပိုးသတ်ဆေးပါဝင်သော ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် အသားရည်ယားယံခြင်း၊ယောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့သော အသားအရေကို ပိုမိုစိုပြေလာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ရေချိုးပြီးချိန်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။"
406-265 (AMENITY)LEMON VERBENA BODY LOTION 30ML
" ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများနှင့် ဆောင်တော်ကူးပန်းကို Lemon နှင့် လိမ္မော်အနွယ်ဝင် Citrus သီးတို့ ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ကို ရရှိနိုင်သည့် Moisturizer ပါဝင်ပြီး Cool Hydration ဖြစ်သည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေကို အေးမြစိုပြေစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-ရေချိုးပြီးချိန်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ "
406-266 (AMENITY)LEMON VERBENA BODY WASH 30ML
"ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများနှင့် ဆောင်တော်ကူးပန်းကို Lemon နှင့် လိမ္မော်အနွယ်ဝင် Citrus သီးတို့ ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် အသားအရေကို စင်ကြယ်စေပြီး အညစ်အကြေးများကင်းစင်စေကာ အသားအရေခြောက်သွေ့သူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ-လိုအပ်သည့်ပမာဏကိုယူပြီး နှိပ်နယ်ပွတ်တိုက်ပေးပြီးလျှင် ရေဖြင့်ဆေးချပေးပါ။"